Tu Tu Tha: October 2009
Wednesday, October 28, 2009 | Labels: tag |4Comments
Wednesday, October 28, 2009 | Labels: ကြွေလွင့်သူ |0Comments
ခုတလောမှာ ဆိုရှယ်ခေတ်တုန်းက အကြောင်းတွေ စကားစပ်မိပြီး ပြန်ပြန် ပြောဖြစ်ကြ တယ်။ တနေ့ကလည်း နှင်းဆီရင်ခွင် အငြိမ့်ကြည့်မိတော့ “ထမင်းအဝစား နှစ်ကျပ်ခွဲ” “ဘယ်မှာလဲ ဘယ်မှာလဲ ဗိုက်ကားအောင် စားလိုက်မယ်” “ဦးတို့ ငယ်ငယ်တုန်းကကွယ်၊ ဦးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကွယ် လွမ်းမိုးဆွေဆွေ၊ လွမ်းမိုးဆွေဆွေ လွမ်းငွေ့တဝေဝေ” ဆိုလို့ ရယ်လိုက်ရတာ ...။
ကျမတို့ငယ်ငယ် .. ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ကာလတုန်းက ဆန်တပြည် ၂ ကျပ် ပြား ၂၀ နဲ့ ပြည်သူ့ဆိုင်က ထုတ်ခဲ့ဖူးတယ် ဆိုတယ်ရင် ခုလူငယ်တွေက “ဘာကြောင်တာလဲ” လို့များ ဆိုလေမလားမသိဘူး။ ၈၈ တုန်းကတောင် “ဆန်တပြည် ၂ ကျပ်ခွဲ စိန်လွင့်ခေါင်းကိုခွဲ” လို့ တကယ်ကြီးကို အော်ခဲ့ကြသေးတာပဲ။ သြော် ခုတော့လည်း သူမဟုတ်သလို။
ကျမတို့ငယ်ငယ်က ကျမ မေမေက “ငါတို့မင်္ဂလာဆောင်ကာစက ရွှေတကျပ်သားကို ၁၅၀” လို့များ လွမ်းလွမ်း ဆွေးဆွေး ပြောရင် ကျမတို့ ခွက်ထိုးခွက်လှန် ရယ်ခဲ့ကြတာ။ တကယ်တော့ စနစ်ကို လွမ်းတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ခေတ်ကို ပြန်လွမ်းမိကြတာ။
ကျမ ဆယ်တန်းတက်တဲ့နှစ် ၁၉၈၆ တုန်းက ပါပါက သင်္ချာ ကျူရှင်ပြတော့ နည်းနည်းချောင်လည်တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ် (အရင်ထက် စာရင်ပေါ့လေ) အဲဒီတုန်းက ကျမ ဆယ်တန်းကျောင်းသူကြီးက မုန့်ဖိုး တကျပ် တိတိ ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ တကျပ်ရရင် ကျမက နေ့ခင်းကျောင်းမှာ ၅ မူးဖိုး မုန့်ဝယ်စားပြီး ကျန်တဲ့ ၅ မူးကို စုထားပါတယ်။ ကျောင်းမှာက ကြံတချောင်းလုံးမှ တမတ်၊ စံရွှေမြင့်တို့ ရွှေအိုးတို့ ဇီးထုပ်က တမတ်၊ ဒါမှမဟုတ် ထန်းလျှက်ချောင်း ၁၅ ပြားတန်းလေး စုတ်လို့လည်း ရသေးတယ်။ ထမင်းစားပြီး အချိုတည်းရုံဆိုတော့ ၅ မူးနဲ့တင် အလုပ်ဖြစ်တယ်လေ။
၅ မူးကို ဘာလို့စုလည်းဆိုတော့ ညနေ ကျူရှင်ချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်တို့၊ အအေးဆိုင်တို့ ထိုင်ပြီး ဟန်ရေးပြချင်လို့။ ရယ်တော့ရယ်ရသား ... အဲဒီတုန်းက ကျမတို့ သန်လျင်မှာ မိန်းကလေးတွေ လူကြီး မပါဘဲ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မထိုင်ရဲသေးဘူးလေ။ လူကလည်း အပျိုပေါက်ဆိုတော့ ဟန်ရေးကလည်း ပြချင်၊ အစားအသောက် ရှားပါးတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ (တကယ်က ခုက ပိုရှားတာ :P) စားကလည်း စားချင် ... အဲဒီတော့ ကျမက ၅ မူးကို ချန်ထားရတယ်။
၅ မူးချန်ရုံနဲ့ ညနေ စားသောက်ဆိုင်လေးတွေ ထိုင်နိုင်ပြီ ထင်ရင်တော့ မှားသွားမယ်။ မုန့်ဟင်းခါးက အကြော်မပါ ပြား ခြောက်ဆယ်၊ အကြော်နဲ့ သုံးမတ်၊ အအေးက ကျောက်ကျောဆို ပြားခြောက်ဆယ်၊ ကျန်တဲ့ ဇီးတို့၊ သစ်ခွ တို့ သံဗူးတို့က သုံးမတ်၊ ဖာလူဒါကတော့ အနားမကပ်နိုင်ဘူး ၁ ကျပ်ခွဲလောက်ရှိမယ်၊ ဆီချက်စားချင်ရင်တော့ ၅ မူးကို ၅ ရက်စုရတယ်၊ ၂ ကျပ်ခွဲကိုး။ သြော်ရှိသေးတယ် ဝက်ခေါင်းသုပ်က သုံးမတ်။
အဲဒီတုန်းက ကျမတို့အိမ်မှာ နည်းနည်းလေးချောင်လည်တယ် ဆိုပေမယ့် ကျမသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် မပြောပလောက်ပါဘူး။ သူတို့ထဲမှာ တယောက်က သင်္ဘောသား သမီး၊ တယောက်က ကုန်ကားမောင်းတဲ့ ဒရိုင်ဘာရဲ့သမီး၊ တယောက်ကတော့ ရေနံချက်စက်ရုံ အရာရှိ သမီး ဆိုတော့ ဘာပဲပြောပြော ကျမထက်တော့ သာတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ကျမကိုတော့ စောင့်ကြပါတယ်။ ဥပမာ ၂ ရက်ကို တခါလောက်ပဲ ဆိုင်တဆိုင် ဆိုင်မှာ ထိုင်ကြတယ်။ ကြိုချိန်းကြတယ်။
တရက်တော့ ကျမတို့ထဲက ပပ ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းက “နက်ဖြန် ဝက်ခေါင်းသုပ် စားရအောင်ဟာ” တဲ့။ အိုကေပေါ့ ကျမလည်း နက်ဖြန်တော့ အနည်းဆုံး သုံးမတ်ရှိရမယ်ပေါ့။ တခြား ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်းတွေကလည်း လိုက်မယ်တဲ့ ... ချိန်းထားလိုက်ကြတယ်။ ဒါ ကျမတို့ ၁၆ နှစ်အရွယ် ဆယ်တန်းကျောင်းသူတွေ အတွက် မဟာ စွန့်စားခန်းကြီးတရပ်ပေါ့ ဟဲဟဲ ... ဟင်းဟင်း ခုလို ဒေးကလပ်တွေ မပေါ်သေးလို့ပေါ့ကွာ ...။
ချော်တောက ငေ့ါပြန်တော့မယ်၊ ဆက်ရရင် နောက်နေ့ သူငယ်ချင်း ၆ ယောက် ၇ ယောက်လောက်ရှိမယ် သန်လျင်မြို့ရဲ့ တခုတည်းသော ဝက်ခေါင်းသုတ် ဆိုင်လေးမှာပေါ့ ... ဒန်ဒန့်တန် ... အဲဒီမှာ ထိုင်မိတာနဲ့ ပပ က ဖောက်ပါလေရော ..
“ဦးလေး ဝက်လျှာရှိလား” တဲ့။ ဆိုင်ရှင် တရုပ်ကြီးက “ရှိတယ်၊ တပွဲစာပဲ ရမယ် တပွဲကို တကျပ်နော်” လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဇာတ်လမ်းက စတော့တာပဲ ... ပပ က “လျှာချည်းပဲ ကျမကို တပွဲပေးပါ” လို့ သုပ်ခိုင်းတယ်။
ပြဿနာက ဝက်လျှာဆိုတာ တကောင်လုံးမှာမှ တချောင်းတည်းပါတာ ဆိုတော့ ရှားလည်း ရှားတယ် ဈေးလည်း ကြီးတယ်၊ ပပ က သင်္ဘောသားသမီးဆိုတော့ ၁ ကျပ်လည်းမမှုဘူး စားနိုင်တယ်။ သို့သော် ရေနံအရာရှိသမီး ဖြစ်တဲ့ (ကျမတို့အခေါ်) မောင်ကြီးက တင်းသွားတယ်။ စားပွဲကို “ဝုန်း” ဆို တချက်ထုပြီး။ “ပပ နင် ဒါမျိုး မလုပ်သင့်ဘူး၊ ဦးလေး အဲဒီဝက်လျှာကို အားလုံးပုကန်ထဲ မျှ ထည့်ပေးပါ” လို့ အော်လိုက်တယ်။
ဟုတ်တာပေါ့ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်၊ သမဝါယမ စနစ်ကြီးနဲ့ ရှင်သန်နေကြရတဲ့အချိန်လေ ပပ ကို ပြန်မပြောရဲ ပေမယ့် ကျမစိတ်ထဲက မောင်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ ထောက်လည်း ထောက်ခံမိတယ် (တော်တော် သတ္တိ ရှိတာနော် .. စိတ်ထဲကပဲ ထောက်ခံရဲတာ) ပပ ကတော့ မောင်ကြီးကို ဒေါသထွက်သွားပုံရတယ်၊ စွာကလည်း စွာတော့ “ဟေ့ ငါအရင်သတိရတာ၊ ငါစားနိုင်လို့ စားတာ နင်တို့အပူမပါဘူး။ ဦးလေး ကျမအတွက်ပဲ သုပ်ပေးပါ” ဆိုပြီး လုပ်ပါလေရော။
တရုပ်ကြီးလည်း ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိဘဲ၊ တပွဲစာ ဝက်လျှာတုံးကလေးနဲ့ အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေ ရှာတယ်၊ ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းတွေ ပါပေမယ့် သူတို့လည်း ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး၊ ဒါမျိုး ပြဿနာ ဘယ်သူမှ မကြုံဖူးကြဘူးလေ၊ ကြံကြံဖန်ဖန် ဝက်လျှာအမှုဆိုပြီး ပေါင်ချိန်ကြီးဆီ ပြေးရမလို။ ဘယ်သူမှ ဝင်မရှင်း ပေးနိုင်တဲ့ ပြဿနာဟာ ပပနဲ့ မောင်ကြီးတို့ရဲ့ ရန်ပွဲအဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းသွားပြီး နောက်ဆုံး ကျူရှင်ချိန် နီးလာတာနဲ့ ဘယ်သူမှ ဝက်ခေါင်းသုပ် မစားလိုက်ရဘဲ ပေါက်ဖော်ကြီးလည်း ဝက်ခေါင်းသုပ်မရောင်း လိုက်ရဘဲ ကျူရှင်ကို စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ သွားလိုက်ရတော့တယ်။ မောင်ကြီးနဲ့ ပပ ကတော့ တပတ်လောက် စကားမပြော ကြဘူး ...။ အင်း ဟိုးခေတ်က စာရေးဆရာကြီးတွေရဲ့ လေနဲ့ ပြောရရင် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ရဲ့ အမွေဆိုး တွေပေါ့။
ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ်၊ ရှားပါးပုံများ ကြည့်ပါဦး ... အဲဒီတုန်းက ဝက်ခေါင်းသုပ်ဆိုင်က စုစုပေါင်း တဆိုင်တည်းဆိုတော့ လျှာကလည်း တချောင်းတည်း ရှိမှာပေါ့၊ ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ ရွေးစရာတွေက ခပ်များများ၊ တဆိုင်မရရင် နောက်တဆိုင်သွားမပေါ့။ နောက်ပြီး အဲဒီတုန်းက အဲလိုအစားအစာတွေကိုပဲ အကောင်းလုပ် စားနေရတာလေ။
ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မှာ ကြီးပျင်းလာသူတွေရဲ့ အကျင့်ကို နည်းနည်း ပြောချင်သေးတယ်။ ခုဏက ပပနဲ့ မောင်ကြီးနဲ့ ဖြစ်တဲ့ ရန်ပွဲမျိုးမှာပေါ့ ... စိတ်ထဲက ပပ ဟာ တကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်၊ မောင်ကြီးက အများအတွက် အမုန်းခံ ပေးတယ် (ကျမတို့လည်း ဝက်လျှာကိုနည်းနည်းတော့ စားချင်တာကိုး) ဆိုတာမျိုးရှိတယ်၊ သို့သော် ကျမတို့က မှန်တဲ့ဘက်က လိုက်မပြောရဲကြဘူး၊ ခေါင်းညိတ်တာ၊ လက်ယျာလက်ပြတာ အသားသေနေကြပြီ။ တခုခုဆို ထောက်ခံပါတယ်လို့ အော်တာ အကျင့်ပါနေပြီ။ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ကလည်း ကျမတို့ကို အဲဒါပဲ သင်ပေး ထားတယ်။
ကျမအဖေက နှစ်စဉ် ရပ်ကွက်ကောင်စီရုံးမှာ ကျင်းပတဲ့ ရပ်ကွက်လူကြီး ရွေးပွဲတွေ သွားသွားတက်ရတယ်၊ ပြန်လာတိုင်း ကာတွန်းဆရာဖြစ်တဲ့ ပါပါက အဲဒီရွေးပွဲတွေရဲ့ ပေါက်တတ်ကရ အဖြစ်အပျက်တွေ ပြောပြပါ များလို့ ကြားဖူးနေကျပဲ။ လူရွေးတယ်သာဆိုတယ် အများသဘောမဟုတ်ဘူး၊ ရွေးပြီးသားလူကို ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူလူထုကို ထောက်ခံခိုင်းတာ၊ ကန့်ကွက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ ဘာမှမဖြစ်ဘူး အဲဒီရွေးပြီးသား လူပဲ ရမှာပဲ။ ကန့်ကွက်တဲ့သူက ကံဆိုးရင် ထောင်ထဲဝင်ရနိုင်တယ်။
မနေ့ညက ကျမတို့ ဘော်ဒါတွေ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်အကြောင်း စကားစပ်မိကြပြန်တော့ ကျမရဲ့ ဇာတ်လိုက်ကြီး တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဟန်က ပြောပြတယ်။ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်က ပေါက်တက်ကရ အဖြစ်တခုပါ။
အပေါ်မှာ ဆိုခဲ့သလို ရပ်ကွက်တခုမှာ လူကြီးရွေးပွဲလား စည်းဝေးလား တခုလုပ်တော့ သဘာပတိက “ကန့်ကွက်မယ့်သူရှိပါသလားခင်ဗျား” လို့ မေးရမယ့်အစား “ထောက်ခံမယ့်သူရှိပါသလား ခင်ဗျား” လို့ မေးမိသတဲ့။ အဲဒီမှာ အောက်ကလူတွေကလည်း အကျင့်က ပါနေတော့ “မရှိပါဘူး” လို့ တပြိုင်တည်း ဖြေလိုက်တယ်။ သို့သော် သဘာပတိက ခပ်တည်တည်ပဲ “ထောက်ခံမယ့်သူမရှိတဲ့အတွက် အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာရုတ်သိမ်းကြောင်း ကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား” လို့ ဆိုသတဲ့။ ဖြစ်ပုံများ။
ကျမရဲ့ ပေါက်တက်ကရစာကို အဆုံးမသတ်ချင်သေးဘူး ... ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ ကာတွန်းလေး တကွက်ကို သတိရမိလို့။ အဲဒီခေတ်က ဗဟို ပါတီကောင်စီဝင်တွေကို သရော်ထားတာပါ။ အဲဒီ လူကြီးတွေက ရိုးရိုး စကားပြောတာတောင် ပါတီဝင်လေသံလေးနဲ့မှ ပြောတတ်တာ ဆိုလားပဲ။ အစည်းအဝေးတွေမှာ “တပိုင်းကတော့ ကျတော်တို့ လမ်းစဉ်ပါတီဝင်တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်၊ တပိုင်းကတော့ အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ သဘောထား ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ စောကြောရပါမယ်” အဲဂလို ပြောလေ့ရှိကြတယ် (အန်ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ တပိုင်းကတော့ ခုသောက်ဖို့ တပိုင်းကတော့ နေ့ဖို့ညစာ ချန်ထားဖို့လို့များ ပြောမလားဘဲ)
ခုဏက ကာတွန်းဆိုတာက ဒီလို ... မိန်းမလုပ်တဲ့သူက အိမ်ကထွက်ခါနီး ယောက်ျားကို “ရှင့်ရဲ့ ဒီအင်္ကျီအပေက ဘာလုပ်ရမှာလဲ” လို့မေးတော့ ယောက်ျားက “အေးအေး ... တပိုင်းကတော့ လျှော်မယ်၊ တပိုင်းက မီးပူ တိုက်မယ်” လို့ပြောသတဲ့။ ဒါနဲ့ မိန်းမကလည်း အမြင်ကပ်ကပ်ရှိလား မသိဘူး အင်္ကျီအပေကြီးကို တခြမ်းပဲ လျှော်ထားပြီး ကျန်တဲ့တပိုင်းကို ပြန့်နေအောင် မီးပူတိုက်ထားလိုက်တယ်တဲ့ ...။ သြော် ဆိုရှယ်လစ်ခေတ် ဆိုရှယ်လစ်ခေတ် ... ခုတော့ သူမဟုတ်ခဲ့သလိုပဲနော်။
Wednesday, October 21, 2009 | Labels: အမှတ်တရ | 8 Comments
တက်စာတွေက ခုတလော အလာများနေတယ်။ တကယ်က ဂျူလိုင်ကောင် မတက်ခင် အရင်တက်တာက တွေ့ကရာရှစ်သောင်း အန်ဒီဖိုးအောင်ပါ။ ဒီကောင်က ကျမကို အတော်လေး အထင်ကြီးနေပုံရတယ်။ ညည်းဖြစ်တဲ့ သီချင်းတဲ့ ...။ လူက မကြည်မလင်ဖြစ်နေတာ ဒင်းက နားမလည် အလိုက်ကမ်းဆိုး မသိဘဲ နောက်ဆက်တွဲနဲ့တောင် တက်လိုက်သေး။ သူ့တက်ထဲမှာ ကြာချင်ကြာလိမ့်မယ်လို့ ခံထားသလို ကျမကလည်း ခပ်တည်တည်နဲ့ နောက်မှ တက်တဲ့ ဂျူလိုင်ကောင်ရဲ့ တက်စာကို အရင်ရေးပေး လိုက်တယ် ..။ အဲဒါက ပိုလွယ်တာကိုး .. ငယ်ငယ်က ကွက်လပ်ဖြည့်ပါ ရေးရသလိုပဲ သူ့ဟာကိုကူးချ ပြီးတော့ တခြားသူတွေ ဘာရေးလည်း ခိုးကြည့် ... ပြီးတော့ တန်းစီပြီး ရေးထည့်လိုက်ရုံပဲလေ။ တခုရှိတာက အင်္ဂလိပ်လို ဆိုတော့ကာ ကိုယ်မတတ်တဲ့ ဘာသာစကားဖြစ်တော့ လေရှည်စရာလည်း မလိုဘူးပေါ့။ မသိတာကို ဆိုလည်း အသံလေး ဖလှယ်လိုက်တာပဲ။
ကဲ ကျမရဲ့ ထုံးစံ လေကရှည်မိပြီ။ အဲဒါပဲ မြန်မာလို ရေးရတာ ... ကိုယ်တတ်တဲ့စာဆိုတော့ လိုရင်းကို မရောက်ဘူး။ နောက်တခါကျ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ရေးတော့မယ် ... ဒါမှ တလုံးမှ မရေးဖြစ်မှာ :P
ခု ဘာတဲ့ ဖိုးအောင်က တက်တာ .. ညည်းမိတဲ့သီချင်းတဲ့ ..။ ရှိတယ် ညည်းမိနေတာ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မနက်က ခပ်အားအားနဲ့ ညီ့ ဘလော့ သွားဖတ်မိတော့ ပိုက်ဆံကောက်သူများဆိုလား ... ဘဲဥတွေ အကြောင်းပေါ့ .. သိချင် သွားသာဖတ်ကြည့် ..
အရမ်းကို တိုက်ဆိုင်တာပဲ ... မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း ၄၅ နှစ်တောင် ရှိပြီတဲ့ .. ခုတလောမှာ ဘာလို့မှန်း မသိဘူး ဒီသီချင်းတပုဒ်ထဲ ထပ်ခါတလဲလဲ ညည်းမိနေတယ်။
“ကူညီပါရစေ ကူညီပါရစေရှင့် .. ကူညီပါရစေ ကူညီပါရစေ ခင်ဗျ” တဲ့။ အင်း သူတို့ ကူညီတာ ၄၅ နှစ်တောင် ရှိသွားပြီ .. မကူညီပါနဲ့ ပြောလည်း ရမယ့်ပုံမပေါ်ဘူး။ ရွာဘုရားပွဲမှာ ထိုးဇာတ် တက်ကတာဆိုလည်း ကောင်းသား .. အောက်ကနေ ဆင်းပါတော့ဗျို့လို့ အော်လိုက်ရုံပဲ .. မရရင် ပြောင်းဖူးရိုးနဲ့ လွှတ်မပေါ့။ ကိုင်း ဖိုးအောင်ရေ ဆိုင်လာမဆိုင်လားတော့မသိဘူး ရေးလိုက်ပြီ .. မဆိုင်ရင်လည်း မသိတော့ဘူး .. ဒါပဲ။ ။
Wednesday, October 14, 2009 | Labels: tag |3Comments
မောင်ငယ် ဂျူလိုင်ဒရင်း က ဤသို့ ဘာမှန်းမသိတာတွေ တက်သဖြင့် သူ့ဆီက ကော်ပီပေ့စ်လုပ်ကာ မော်ဒီဖိုင်းပြန်လုပ်ပြီးသကာလ ပြန်လည် တင်ပေးလိုက်ရပါကြောင်း ...
1. What is your name : Tu Tu Tha
2. A four Letter Word : Tool
3. A boy's Name : Thar Soe (ရောသမမွှေ)
4. A girl's Name : Thinzar Wint Kyaw (မင်းသမီး၊ မော်ဒယ်)
5. An occupation : Tea shop waiter
6. A color : Thone Bee Car or Thi La Shin (သုံးဘီးကားရောင်ဒါမှမဟုတ် မယ်သီလရှင်ရောင်ကိုပြောတာ၊ ခု ဒီစာရဲ့ အရောင်ပဲပေါ့)
7. Something you'll wear : T - Shirt
8. A food : Tea Leaf Salad
9. Something found in the bathroom : Tab
10. A place : Than Lyin (ရန်ကုန်တဘက်ကမ်းက ကိုယ်နေတဲ့မြို့ပဲ)
11. A reason for being late : Typing (စာကတော့ ဘာရိုက်ရသလဲမမေးနဲ့)
12. Something you'd shout : Tauk ! (တောက် !)
13. A movie title : Tom & Jerry
14. Something you drink : Tarquilar (စာလုံးပေါင်းတော့ မှားချင်မှားမယ် အသံကတော့ တကီလာလို့ထွက်တယ် မက္ကဆီကန် အရက်ဟုဆို)
15. A musical group : The Tree Band (မြန်မာပြည်က)
16. An animal : Tiger
17. A street name : Thein Phyu (သိမ်ဖြူလမ်း)
18. A type of car : Taxi
19. The title ofasong : Thank you for the music (ABBA)
20. A verb : Tease
Monday, October 12, 2009 | Labels: tag |4Comments
မယူလိုက်က မိုက်လို့ထင် ယူလိုက်ပြန်က ကြိုက်လို့ထင် (ဇာတ်သိမ်း)
“လာခေါ်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ မင်း ပြန်လာဦးမလား လာမေးတာ”
“ဟင့်အင်း” ဆိုတဲ့စကားက နွေ့ပါးစပ်က ရှောရှာရှူရှူ ထွက်သွားခဲ့တယ်။ ကိုကိုကသဲ့သဲ့ ပြုံးတယ်။
“ထင်ပါတယ်။ မင်းက သိပ်ကိုလွတ်လပ်တဲ့ ဘဝမှာ ပျော်တတ်နေပြီကိုး။ အိမ်ထောင်သည် မိန်းမ တယောက်လို မင်းဘယ်နေနိုင်ပါတော့မလဲ”
ကျမ မုန်းတာလည်း အဲဒီလို ရိတဲ့ ထေ့တဲ့စကားတွေ ပြောတာကိုပဲလို့ ပြောချင်ပေမယ့် အမေ့အိမ်မှာ ထပ်ပြီး အချင်းမများချင်တော့ဘူး။
“ကောင်းပြီလေ။ ငါ့တာဝန်ကျေပြီ။ သိထားဖို့က ငါ့အတွက် မိန်းမ မရှားဘူးဆိုတာပဲ”
“သိပါတယ်။ အပေါစားတွေကတော့ ဘယ်ရှာရှာရတာပဲဟာ”
နွေလည်း မိန်းမပီပီ သူနာမယ့် စကားတခွန်း ရွေးပြောလိုက်တယ်။ မုန်းကြပြီ ဆိုမှတော့ နာကျင်စေမယ့် စကားလုံးတွေပဲ ရွေးချယ်ပြောကြစမြဲ မဟုတ်လား။
“နေပါဦး မင်းက ဘယ်သူ့အားကိုးနဲ့ တခုလပ် ဘဝကို ရွေးချယ်တာလဲ။ မင်း စဉ်းစားချင် စဉ်းစားဦးနော်။ မင်းက မိန်းကလေး”
အဲဒီစကား ကိုကို့ဆီက ကြားလိုက်တော့ နွေ ပိုသေချာသွားတော့တယ်။
“ကျမ စကားကုန်ပြောတာ။ ကျမ ကိုကို့ကို စိတ်ကုန်သွားပြီ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မပေါင်းနိုင်တော့ဘူး။ တခုလပ်ဘဝနဲ့ အားငယ်ရမယ်ဆိုရင်လည်း အားအငယ် ခံလိုက်တော့မယ်။ ကျမရဲ့ တန်ဖိုးကို နားမလည်တဲ့ သူနဲ့တော့ အတူမနေနိုင်ဘူး”
“ဘာ၊ တန်ဖိုးဟုတ်လား .. ဟားဟား .. ရယ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ မင်းက ဘာတန်ဖိုးတွေများ ရှိနေလို့လဲ။ မင်းဆီက ရွှေထွက်နေလို့လား။ တကယ်တော့ မင်းက တန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်ဘူး။ မင်းဘာသာမင်း ဘဝင်တွေ စွတ်စက်မြင့်နေတာကွ။ ကောင်းပြီလေ .. ငါကလည်း မင်းလို ဘဝင် လေဟပ်နေတဲ့ မိန်းမနဲ့ မပေါင်းချင် ပါဘူး။ မိန်းမဆိုတာ မိန်းမလိုပဲ အလှပြင်၊ အတင်းပြော၊ လင်ယောက်ျားကို ပြုစု၊ ထမင်းဟင်းချက်၊ ကလေးမွေး၊ ယောက်ျားစကား တခွန်းဆို တခွန်း နားထောင် … ဒါပဲပေါ့ .. ဘာလဲ .. တန်ဖိုး .. ဘာတန်ဖိုးမှ မလိုဘူး”
လာပြန်ပြီ မထိုက်ရဲ့ ကိုလေးလို လူတယောက်။ ယောက်ျားတွေဟာ ဒီလိုချည်းပဲလား။ ကိုကို့ရဲ့ ရိစကား၊ ထေ့စကားတွေကို အသားတဆတ်ဆတ်တုန်အောင် ဒေါသထွက်ရင်း၊ အဲဒီ ဒေါသတွေကို ကြိတ်မှိတ် မြိုသိပ်ရင်း နားထောင်နေရတယ်။ နွေ ရုံးသွားရတော့မယ်၊ ဒီနေ့ လပတ် ရုံးဝန်ထမ်း အားလုံး အစည်းအဝေး ရှိတယ်။ နွေ မသွားလို့မဖြစ်ဘူး။ နွေ့ဘာသာ ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ .. နွေ ရုံးသွားမယ်။
“ကျမ ရုံးသွားတော့မယ် ကိုအောင်”
သူ့စကားကို ဆုံးအောင် နားထောင်ပြီး ဘာမှပြန်မပြောဘဲ ရုံးသွားမယ် ပြောလိုက်တော့ ကိုကို တော်တော်လေး အောင့်သွားပုံရတယ်။ နွေ့ကို ခပ်စိမ်းစိမ်း တချက်ကြည့်ပြီး .. “ကောင်းပြီလေ .. မင်းနောင်တ မရပါစေနဲ့၊ မင်း ခြေသလုံးဖက်ပြီး လာတောင်းပန်တောင် ငါ ပြန်လက်မခံနိုင်ဘူး” ဆိုတဲ့စကားကို ပြောရင် ထိုင်ရာက ထတယ်။ နွေလည်း ထိုင်ရာက လိုက် ထလိုက်တယ်။ စိတ်ချပါ နွေက တွေဝေတတ်ပေမယ့် ခေါင်းတော့ တော်တော်လေး မာပါတယ် ကိုကို။
“သမီး မျက်ရည်ကျမယ်ထင်တာ” လို့ ပြောလာတဲ့ အမေ့ကို နွေ လှလှပပလေး ပြုံးပြနိုင်ခဲ့တယ်။ ခုချိန်မှာ တခုပဲ နွေသိတယ်။ နွေ ရုံးသွားရမယ်။
လက်ခုပ်သံတွေ ဆူညံသွားပြီး သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးနွေ့ကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ နွေ လုံးဝ ထင်မထားခဲ့ဘူးလေ။
နွေတို့ရုံးမှာ တလတခါ အကောင်းဆုံးသတင်းထောက်နဲ့ အကောင်းဆုံးဝန်ထမ်းဆု ပေးလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီ ဆုတွေကို ခုလို လပတ် အစည်းအဝေးတွေမှာ ကြေညာပြီးပေးတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီဆုကိုပေးရသလဲ ဆိုတာပါ ရှင်းပြတာ။ ဒီလ နွေ .. သွေးလွန်တုပ်ကွေး သတင်းနဲ့ အကောင်းဆုံး သတင်းထောက်ဆုကို ရတယ်တဲ့။ နွေ ဘယ်လိုလုပ် ထင်ထားမှာလဲ။ မအိကို လှည့်ကြည့် လိုက်တော့ ပြုံးပြနေတယ်။
ကြည့်စမ်း .. ယောက်ျားနဲ့ ကွဲလာတဲ့နေ့မှာ နွေက အကောင်းဆုံး သတင်းထောက်ဆုကို ရတယ်တဲ့။ ရယ်စရာ မကောင်းဘူးလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သွေးလွန်တုပ်ကွေးသတင်းကို နွေ အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံး လုပ်ရကြိုး နပ်လိုက်တာ။
“ဒီသတင်းက ဘာမှ ဟာကွက်ပျော့ကွက်မရှိဘူး။ Source တွေ စုံတယ်၊ Background တွေလည်း အကုန်ထည့်ထားတယ်။ ရွေးတဲ့ Angle ကလည်း ဘယ်သူမှ ထင်မထားတဲ့ Angle၊ စိစစ်ရေးက ဖြုတ်နိုင်တဲ့ သတင်းတပုဒ်ဖြစ်ပေမယ့် မဖြုတ်အောင် ပါးပါးလေး ရေးပြသွားနိုင်တဲ့ ပညာလည်း ပါတယ်။ အားလုံး အတုယူသင့်တဲ့ သတင်းတပုဒ်ပဲ”
ဆရာက ရှင်းပြနေတော့ နွေ မျက်နှာတွေ ပူလိုက်တာ။ ဒါ မအိကျေးဇူးကြောင့်မဟုတ်လား။ မအိသာ မပါရင် နွေ ဘယ်လိုလုပ် ဒီလို သတင်းကို ရေးနိုင်မှာလဲ။
“အဲဒီလိုလည်း မတွေးပါနဲ့ နွေရယ် .. မအိက နွေ ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ညွှန်ပြရုံ လေးပါ။ တကယ်က Source တွေအားလုံးကို နွေပဲ အင်တာဗျူးလုပ်တာလေ။ ရေးတော့လည်း နွေ ရေးတာပဲ မဟုတ်လား။ မအိက အက်ဒစ် လုပ်ပေးရုံလေးဥစ္စာ” လို့ ပြုံးပြုံးလေး ပြောနေတဲ့ မအိကို နွေ သိပ်လေးစားတာပဲ။
မအိက နွေ့ မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲကိုလည်း ဖတ်တတ်သေးတယ်။ “နွေ ဘာဖြစ်နေလဲ” တဲ့။ နွေ တချက် တချက် ငိုင်သွားတာကို ရိပ်မိမှာပေါ့။ ကိုကို့ကို နွေ ပြန်မလွမ်းပေမယ့် တခုလပ်ဆိုတဲ့ နာမည်ဆိုးကြီးနဲ့ နွေ ဘယ်လိုစခန်းသွားမလဲ ဆိုတာ .. တချက်တချက်တော့ ရင်လေးမိတာ အမှန်ပဲလေ။
မအိကိုတော့ နွေ အသေးစိတ်ပြောပြလိုက်တယ်။ မအိကလည်း အမေပြောသလိုပဲ နွေ့ကို ပြန်ပြောတယ်။
“မျှဝေ ခံစားမပေးနိုင်တဲ့ လူတယောက်နဲ့ ဘဝခရီး အတူတူသွားမယ့်အတူတူ တယောက်တည်းပဲ သွားမှာပေါ့ နွေရဲ့။ ဘာအားငယ်စရာရှိလဲ၊ နွေက အားရှိတဲ့ မိန်းကလေး တယောက်ပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိစမ်းပါ” တဲ့ နွေ့ကို အားပေးတာ။
နွေ့သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြတော့ အောင်ထူးတယောက်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့သူတွေက အားပေးတယ်။ အောင်ထူးကတော့ “နင်တို့ကိုက ကြောင်တာပါဟာ။ ငါတော့ ကိုအောင်ပြောတာ လက်ခံတယ်။ မိန်းမဆိုတာ တော်စရာ မလိုဘူး၊ လှရင်ပြီးပြီ” ဆိုတဲ့စကားကို နောက်သလိုလို အတည် လိုလိုပြောနေလို့ ကျန်တဲ့သူတွေက သူ့ကို ဝိုင်းဆဲကြသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီကောင်လည်း ခဏပါ မထိုက်က “အောင်ထူးရယ် .. နင်ကော လှရုံလှပြီး ဘာဦးနှောက်မှ မရှိတဲ့ မိန်းမကို ယူမလား” ဆိုပြီး မေးလိုက်တော့ ငြိမ်သွားတယ်။
ထူးထူးဆန်းဆန်း မြင့်မိုက “နွေ .. နင် တကယ် မခံစားရဘူးလား” လို့ မေးတယ်။ အဲဒီစကား အတွက်တော့ နွေ ခဏလေးဆွံ့အသွားတာ အမှန်ပဲ။ ဘာလို့ဆိုတော့ ကိုကို့ကို နွေ တကယ်ချစ်ခဲ့တာကိုး။ ပြီးတော့ သံယောဇဉ်လည်း တကယ်ရှိတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် နွေ ခေါင်းခါပြလိုက် ပါတယ်။
မထိုက်ကတော့ “ငါတို့တတွေလည်း ဘာတွေဖြစ်နေကြလည်း မသိဘူးနော်။ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဂြိုဟ်ဆိုး ဝင်နေတယ် ထင်ပါရဲ့ဟာ” လို့ ညည်းတယ်။ မထိုက်ကော ခံစားနေရလား။ မခံစားဘဲ ဘယ်နေ ပါ့မလဲလေ .. နှစ်ရှည်လများ တတွဲတွဲ နေခဲ့တဲ့သူပဲဟာ။ မထိုက်က သူ့ ဘေးလွယ်အိတ်ထဲက ကတ်ပြားလေး တခု ထုတ်ပြတယ်။
သြော် ကိုလေးတောင် မင်္ဂလာဆောင်တော့မှာကိုး .. မြန်လိုက်တာ။ သူပြောတဲ့ သဘောဖြူတောသူ လေးပဲ ဖြစ်ပါစေလို့ နွေတို့ ဆုတောင်းရမှာလား မပြောတတ်တော့ဘူး။
“ဒီနေ့ လက်ဘက်ရည်ဖိုးကို နင်ရှင်းရမှာနော်နွေ” လို့ မြင့်မိုက ခပ်သွက်သွက်ပြောလာတယ်။ အားလုံးရဲ့ ပူပင်သောကတွေ မေ့လျော့သွားအောင် စကားလမ်းကြောင်းလွှဲတယ် ဆိုတာ သိသိ ကြီးနဲ့ပဲ အားလုံး သူ့စကားကို စိတ်ဝင်စားသယောင် လုပ်လိုက်ကြတယ်။
အောင်ထူးကတော့ “ဟုတ်တယ် နွေ၊ နင် တခါမှ မကျွေးဖူးဘူး .. ဒီနေ့တော့ နင်ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ငါ့ကို ထမင်းပါကျွေးတော့”
“အောင်မာ ..ကောင်စုတ် .. လက်ဘက်ရည်ပဲ တိုက်နိုင်မယ်။ သတင်း ပထမဆုက ဘယ်လောက်များ ရလို့လဲ”
“ဟင် နင် အရင်လို ကိုအောင့်အတွက် ဘောင်းဘီတို့ ဝက်ခေါင်းသုတ်တို့မှ ဝယ်သွားစရာမလိုတော့တာ”
မထိုက်က လှမ်းဟန့်ပေမယ့် မရတော့ဘူး။ အောင်ထူးစကားက ကျွံသွားပြီ။ တကယ်တော့ အဲဒီ စကားက အတိတ်ကို ပြန်အောက်မေ့ပြီး လွမ်းစရာဆိုပေမယ့် နွေ လုံးဝကို မလွမ်းတော့တာ။ နွေ့နှလုံးသားတွေပဲ ထုံသွားတာလား။
“နေစမ်းပါဦး .. နင်တို့က ငါယောက်ျားနဲ့ ကွဲတဲ့ကိစ္စကို ပျော်စရာများ မှတ်နေကြလားဟင်။ ဟိုဟာကျွေးခိုင်း ဒီဟာတိုက်ခိုင်းနဲ့” လို့ နွေ သူတို့ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြန်နောက်ပြောင်နိုင်နေပြီ။
မသောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ လက်ဖက်ရည် ကျဆိမ့်ကို တငုံငုံရင်း “မယူလိုက်က မိုက်လို့ထင် .. ယူလိုက်ပြန်က ကြိုက်လို့ထင်” ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးက ခေါင်းထဲ ပြန်ရောက်လာပြန်တယ်။ မိုက်တယ်ပဲ ထင်ထင်၊ ကြိုက်လို့ပဲထင်ထင် .. နွေကတော့ ယူသင့်ရင်ယူမယ် .. မယူသင့်ရင်လည်း ထားခဲ့ လိုက်မယ်။ အဲဒီအတွက် ထိုးလာမယ့် လက်ညှိုးပေါင်းများစွာကိုလည်း ရင်ဆိုင်မယ်၊ ကဲ့ရဲ့ စကားတင်းဆိုလာမယ့် ပါးစပ်ပေါင်းများစွာ ကိုလည်း နွေမကြောက်ဘူး ..။ ချီးကျူးစကားတွေ ကိုလည်း နွေ မယစ်မူးဘူး။
နွေကြောက်တာ တခုတည်း .. အဲဒါကတော့ လက်ညှိုးတွေကြောင့်တော့ .. ကိုယ်မြတ်နိုးတဲ့ ကိုယ့်ဝါသနာ၊ ကိုယ်တည်ဆောက်ထားရတဲ့ အောင်မြင်တဲ့ အနေအထားတွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး တသက်လုံး ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ဆိုတဲ့ဘဝကြီးထဲ ခေါင်းငုံ့ ခံနေရမှာကိုပါ။ အဲဒီလို မဖြစ်ချင်တဲ့အတွက် ပေးဆပ်ရမယ့် အရင်းအနှီး ကတော့ တော်တော်လေးကြီးတယ် .. နွေဆိုရင် နှလုံးသားနဲ့ မိန်းမသားဘဝ တခုလုံး ပေးလိုက်ရတာ။
ဒါပေမယ့် ပြန်ရတဲ့ သင်္ခန်းစာတွေနဲ့ တွက်ရင် .. တန်ပါတယ်လေ။ ။
“မယူလိုက်က မိုက်လို့ထင် ယူလိုက်ပြန်က ကြိုက်လို့ ထင်” နှင့် ပတ်သက်သမျှ
တကယ်တော့ ပြောဖို့ သိပ်မလိုလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း စာဖတ်သူဆိုတာက စာဖတ်မိပြီဆိုရင် ဒါ စာရေးသူရဲ့ ဘဝအကြောင်းများလားလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ် (ကျမ ကိုယ်တိုင်တောင် အဲဒီလို တွေးဖူးခဲ့တာကိုး) ခု ကျမရဲ့ “မယူလိုက်က မိုက်လို့ထင် ယူလိုက်ပြန်က ကြိုက်လို့ ထင်” ကိုလည်း ကျမရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေလားလို့ တချို့က မေးလာပါတယ်။ ကျမအကြောင်း မဟုတ်ဘူးလို့ ရဲရဲကြီး ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နွေ့ကိုတော့ ကျမကိုယ်တိုင် ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း ပုံသွင်းမိတာ အမှန်ပါပဲ။ အဲဒါကို ဝန်ခံပါတယ်။ ကျမရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း တကယ့်အပြင်က ဇာတ်ကောင်ကို ဝတ္ထုထဲမှာ အသက်သွင်းထား တာပါ။
နောက်တခုကတော့ ကျမ ပြည်တွင်းက မီဒီယာလောကမှာ ကျင်လည်ခဲ့ကတည်းက သတင်းသမားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝတ္ထုရှည်တပုဒ် ဖန်တီးချင်တဲ့ အာသီသ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကလည်း အကြောင်းရှိပါတယ်၊ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ နောက်ပိုင်း မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေမှာ စာနယ်ဇင်းသမားတို့၊ သတင်းထောက်တို့ အကြောင်းတွေကို ရိုက်ပြတာတွေ တွေ့ရတော့ တော်တော်လေး ဘဝင်မကျ ဖြစ်မိလို့ပါ။ တချို့ကလည်း လွယ်အိတ်လွယ် ကျွဲကော်ကိုင်း မျက်မှန်တပ်လိုက်တာနဲ့ စာနယ်ဇင်းသမား ဖြစ်သွားလေရဲ့။ တချို့ သတင်းထောက် တွေကျပြန်တော့ စုံထောက်လိုလို၊ မှုခင်းကျဆင်းရေးရဲလိုလိုနဲ့ တကယ့် သတင်းထောက်တွေရဲ့ ဘဝကို ပုံဖော်ထားတာ မတွေ့ရဘူး။ နောက်တခါ အခြေခံရိုက်ထားတဲ့နေရာ ကျပြန်တော့လည်း တကယ့် သတင်းခန်းနဲ့ မတူပြန်ဘူးလေ။ ကြည့်ရတာ ရုပ်ရှင်သမားတွေက တကယ့်သတင်းခန်းကို ရောက်ဖူးပုံမရဘူး။ ဒါလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့က သူတို့နဲ့ ဆက်ဆံဖူးတဲ့ pop ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းလောက်ကိုပဲ သိကြတာကိုး။ အဲဒီတော့ သတင်းထောက်တွေ ဘယ်လိုရုန်းကန်ရတယ်၊ သတင်းခန်းမှာ ဘယ်လို ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို သိပ်ရေးချင်ခဲ့မိတာပါ။
ကျမကိုယ်တိုင်လည်း ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အတွက် သတင်းထောက်လေးတွေရဲ့ ပြဿနာတွေ၊ ဘဝတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လေ့လာခွင့်ရခဲ့တော့ ဒီထဲကမှ “နွေ” ဆိုတာကို ကျမ ဆွဲထုတ်မိတာပါ။ နွေ့လိုပဲ တခြားတခြားသော သူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ၊ အားမရစရာ၊ စိတ်ဆင်းရဲစရာ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ဒုက္ခတွေ၊ ဘဝတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။
ချိုးလင်းပြာ မဂ္ဂဇင်းက ပြည်ပမှာ ထုတ်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်းလည်း ဖြစ်လေတော့ ... ကျမ အားမရတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေအတွက် အင်အားတရပ် ဖြစ်စေချင်လို့ ဒီဝတ္ထုကို ဖန်တီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမရဲ့ လောကြီးမှုကြောင့် ဆိုလိုရင်း မရောက်ဘဲ တလွဲဖြစ်သွားခဲ့ရင် ကျမရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမရဲ့ “နွေ” ကတော့ ခုဆို သူ့ကိုကိုနဲ့ သားလေးလား၊ သမီးလေးလား တယောက်တောင် ရနေရောပေါ့ :P
Wednesday, October 07, 2009 | Labels: ဝတ္ထုရှည် | 12 Comments
“ကယ်ကြပါဦးဗျို့ .. မနိုင်တော့ဘူး ..”
ဂျာနယ်ထုတ်ကြီးကို ထမ်းပြီး ကိုးယိုးကားယား တက်လာတဲ့ အောင်ထူးကို နွေတို့တွေ သနားရမလို ရယ်ရမလို ဖြစ်နေကြတယ်။ ဒီတိုက်မှာကတော့ ထူးထူးထွေထွေ အလုပ်သမားရယ်လို့ ရှိတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ သတင်းထောက်ပေမယ့် ဂျာနယ်ထုတ်လည်း ကူထမ်းချင် ထမ်းရမှာပဲ။ အောင်ထူး ခမျာ .. မြေညီထပ်ကနေ ၇ ထပ်ကို ဒီအထုတ်ကြီးထမ်းတက်လာရတာ မောရှာမှာပေါ့။
သူပစ်ချလိုက်တဲ့ ဂျာနယ်ထုတ်ကို ယူပြီး ကိုသက်ခိုင်က နွေတို့ကို ဝေပေးတယ်။ နွေတို့ရဲ့ သတင်း ရင်းမြစ်တွေကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ရယ် .. နွေတို့ကိုတာ တယောက်ကို ၃ စောင်ရယ် ကိုသက်ခိုင်က ပေးတယ်။
မြင့်မိုက စိတ်ပျက်လက်ပျက်ညည်းတယ်။ ပြောမယ့်သာပြောတာပါ။ သူ့သတင်း စာပေစိစစ်ရေးက မလွတ်ဘူးဆိုတာ မူကြမ်း ရုံးကျကတည်းက သိပြီးသားပဲ။ နွေတို့တွေအတွက် ဒီ သတင်းလေး တွေက ပိုက်ဆံတွေဆိုလည်း ဟုတ်သလို နာမည်လေးတွေ တည်ဆောက်ခွင့်ရတဲ့ အရာတွေ ဆိုလည်း မမှားဘူးလေ။ ပိုက်ဆံမရရင်တောင် ကိုယ့်နာမည်လေးကို သတင်းနဲ့ ယှဉ်တွဲ တွေ့ခွင့် ရလိုက်ရင် ပျော်ကြတာ မဟုတ်လား။
စာပေစိစစ်ရေးနဲ့ ဂျာနယ်တိုက်ဆိုတာကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ သူတို့က နွေတို့ရဲ့ သတင်းတွေကို ရှာကြံဖြုတ်မယ်၊ နွေတို့ကလည်း လွတ်အောင် ကြံဖန်ရေးကြမယ်။ ဒါပဲလေ။ ဒီကြားထဲ သူတို့ဟာ သူတို့ ဖြုတ်ဖို့မေ့သွားတာကို သူတို့အထက်ကထောင်းတော့မှ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် အယ်ဒီတာတွေ ကို ထုခြေလွှာတင်ခိုင်းတာတွေ၊ နောက်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ ခံဝန်ကတိ ထိုးခိုင်းတာတွေက ရှိသေး တယ်။
“နွေ .. သွေးလွန်တုပ်ကွေးသတင်း ရေးဖို့အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား”
“ဖြစ်ပြီမအိ။ နွေ အင်တာဗျူးတွေလည်း ဖြည်ချထားတယ်၊ အချက်အလက်တွေလည်း တော်တော် စုံပြီ။ ရေးလို့ရပြီထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မအိနဲ့တူတူရေးမယ်နော်”
နွေ့စကားကို မအိက ပြုံးပြီး နားထောင်နေတယ်။ တကယ်တော့ ဒီသတင်းရေးဖို့ အားလုံး အဆင်သင့် ဖြစ်နေတာ ကြာပြီ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ကဘယ်လို စပြီး ရေးရမှန်း မသိဘူးဖြစ်နေတာ။ ခုလို မအိမေးလိုက်တော့ အတော်ပဲပေါ့။
“အိုကေ .. နွေအားရင် မအိစားပွဲကို လာခဲ့တော့”
နွေ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ မအိစားပွဲနားကို ခုံတလုံးရွှေ့သွားလိုက်တယ်။
သတင်းကို ဘယ် Angle ကထွက်မလဲ၊ စတိုရီ အိုင်ဒီယာက ဘာလဲ၊ သတင်းလိဒ်ကို ဘယ်လို ရေးမလဲ။ မအိရဲ့မေးခွန်းတွေကို နွေ အိုးနင်းခွက်နင်း အဖြေပေးနေမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ မအိက နွေ့အယူအဆတွေကို မငြင်းဘူး။ သူ့အယူအဆတွေနဲ့ ဖြည့်စွက်လိုက်တော့ ဒီ သတင်းဆောင်းပါးလေးက လှလှပပလေးဖြစ်လာတယ်။
“ဒီသတင်းကို Hard news ပုံစံနဲ့ မရေးဘဲ Soft news ပုံစံနဲ့ ရေးကြည့်ရအောင်။ နွေမြင်ခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းနဲ့ စထွက်မယ် ဟုတ်ပြီလား”
နွေ့အတွေးထဲမှာ ကလေးဆေးရုံက မြင်ကွင်း ပြန်ပေါ်လာတယ်။ ကလေးတယောက်ရဲ့ အလောင်းကို တွန်းထုတ်လာတဲ့ အဖေနဲ့ အမေ..။ နွေ့ရင်ထဲမှာ ဆို့ကြပ်သွားတယ်။
“တကယ့် စတိုရီက သွေးရောင်းစားတာ နွေရဲ့။ ဒါပေမယ့် ဒါကို လိဒ်သွားထွက်ပြီး အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ရေးပြလိုက်ရင် နွေ့သတင်းတပုဒ်လုံး စိစစ်ရေးက လှီးလိုက်လိမ့်မယ် .. မြန်မာပြည်မှာ ဂျာနယ်လစ် လုပ်နေသရွေ့တော့ အလှီးမခံရအောင် ရေးတတ်ဖို့ လိုတယ်။ ကိုယ်ရေးချင်တာလည်း ရေးရ .. သူတို့လည်း သဘောကျ ပုံစံမျိုးရေးတတ်တာကိုက ပညာပဲ”
မအိရဲ့စကားတွေကို နွေမှတ်ထားလိုက်တယ်။ ဟုတ်တာပဲ၊ အဖြုတ်မခံရအောင် ရေးမှဖြစ်မှာပေါ့။
“သွေးရောင်းစားတာကိုလည်း ထည့်ရေးချင်တယ် မအိရဲ့ .. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ”
“ထည့်မယ်လေ .. ဒါပေမယ့် အဲဒါကို ပါးပါးလေး လှလှပပလေး ထည့်မယ်။ အဖြုတ်မခံရအောင် ပေါ့”
မအိရှင်းပြတဲ့အတိုင်း သေသေချာချာ မှတ်ထားလိုက်တယ်။ ပြီးရင် မြစံပယ်မှာ သွားရေးဦးမှ။ ရုံးပေါ်မှာက ဆူညံနေတာ။ မအိတို့လို ပါရမီမရှိတော့ မရေးနိုင်ဘူး။ ဒီနေ့လို ဂျာနယ်ထွက်ရက်ဆို ပိုဆိုးသေး။ သတင်းခန်းဆိုတော့လည်း ဘယ်တိတ်ဆိတ်ပါ့မလဲလေ။
“မိနွေရေ .. ဒိုးမယ်ဟေ့ လိုက်မှာလား”
မထိုက်ကလှမ်းမေးလိုက်မှ သတိရသွားတယ်။ ဟုတ်သားပဲ ပန်းဆိုးတန်း လောကနတ်မှာ စိတ်ကူးချိုချိုက စာအုပ်ပြပွဲလုပ်နေတာ။ မထိုက်က သတင်းယူဖို့သွားမလို့ .. နွေကတော့ စာအုပ်တွေကို သွားငေးမလို့။ ကိုကိုနဲ့ယူပြီးမှ စာအုပ် တအုပ်တောင် မဝယ်နိုင်သေးဘူး။ အရင်က အမေတို့ အိမ်မှာ တုန်းကဆိုရင် နွေက မုန့်ဖိုးစုပြီး စာအုပ်တွေ ဝယ်တာ။ နွေမဝယ်လည်း အဖေက ဝယ်ပေးတာပါပဲ။
“ဒေါ်ထိုက် ဘယ်လိုလဲ .. ရည်းစားနဲ့ ပြတ်ပြီဆို” လို့ မအိက လှမ်းမေးတာကို မထိုက်က အပြုံးမပျက် ပြန်ဖြေတယ်။ မထိုက်ရင်ထဲမှာတော့ ငိုနေမှာပေါ့လေ။ နွေကသာ လိုက်ခံစားနေတာ မထိုက်က နွေတို့ကို အဲဒီကိစ္စပြောပြပြီးတဲ့ နေ့ကစပြီး ကိုလေးအကြောင်း တခွန်းတောင် မဟတော့ဘူး။ ပုံမှန်အတိုင်း သတင်းအလုပ်တွေပဲ ဖိလုပ်နေတာ။
“ဟယ် မထိုက်ရည်းစားက ဒီလောက်ချောလည်းချော မထိုက်ကိုလည်း ဒီလောက်ချစ်တဲ့ဟာ ဘာလို့ပြတ်ရတာလဲ။ မထိုက်က မထိန်းလို့ထင်တယ်”
ဘုမသိဘမသိနဲ့ မားကတ်တင်းက ဆွေဆွေက လာဝင်ပြောတယ်။ ဆွေဆွေ့ကို မထိုက်က ဆတ်ခနဲ လှည့်ကြည့်လိုက်ပေမယ့် ဘာမှတော့မပြောဘူး။ ဒါပေမယ့် မအိက ..
“ယောက်ျားဆိုတာ ထိန်းရအောင် ကလေးမှမဟုတ်ဘဲ ဆွေရယ်” လို့ ဝင်ပြောတယ်။
“မဟုတ်ဘူးလေ .. ဆွေဆိုလိုတာက ဒီလို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ယောက်ျားမျိုး ရဖို့ မလွယ်ဘူး မဟုတ်လား”
“ဟားဟား .. ဆွေကတော့နောက်ပြီ။ သူပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ ယောက်ျားဖြစ်ရမှာလား။ သူလည်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ မထိုက်လို မိန်းမကို ဆုံးရှုံးရတာပဲဟာ၊ သူကမှ တန်ဖိုးကို မသိတာ”
“ဟင် .. မအိစကားတွေကလည်း ရှုပ်နေတာပဲ” လို့ ဆွေဆွေက ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့ပြောရင်း လက်ထဲက မှန်ဝိုင်း သေးသေးလေးနဲ့ သူ့မျက်နှာကို စေ့စေ့စပ်စပ်ကြည့်နေလေရဲ့။
ဆွေဆွေက မှုံနေအောင်လှတဲ့ ကောင်မလေးတယောက်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ မားကက်တင်း ဆိုတော့ အဝတ်အစားကိုလည်း ကျော့နေအောင် ဝတ်ရတယ်၊ အလှအပကလည်း ပြင်ရတယ်၊ စကားကိုလည်း ကတ်စတန်မာ ကြိုက်အောင် ချိုချိုလေး ပြောရတယ်၊ နွေတို့လို အချင်းချင်းနဲ့ စကား ပြောရင်တောင် သူ့ဟန်ပန်နဲ့ စကားသံတွေက ကတ်စတန်မာကို ပြောသလို ဟန်လုပ်သံ တွေက ပါနေတတ်တာ။ မြင့်မိုကတော့ “ချွဲပစ်နေတာပဲ ကြည့်မရပါဘူးဟာ၊ အဆံမရှိဘူး ဟန်ပဲရှိတဲ့ဟာတွေ” လို့ အမြဲပြော တတ်တယ်။ နွေကတော့ အလိုက်အထိုက်ဆက်ဆံပါတယ်။
ဆွေဆွေကတော့ သူ့ရည်းစားက ဘယ်လိုအရည်အချင်းရှိတာ၊ သူ့ကို ဘယ်လိုချစ်ပြီး ဘယ်လောက်ထိ ဂရုစိုက်တာ၊ ယောက္ခမလောင်းတွေက ဘယ်လို သဘောကောင်းတာ၊ ပိုက်ဆံလည်း ဘယ်လို ချမ်းသာတာ၊ မင်္ဂလာဆောင်ရင် ဘယ်ဟိုတယ်မှာ ဆောင်မှာ ဆိုတာတွေ အမြဲ ပြောတတ်တယ်။ အဲဒါကိုပဲ မြင့်မိုက ကြည့်မရတာလေ။
“ယောက်ျားတွေ ဂရုစိုက်တယ်၊ အလိုလိုက်တယ် ဆိုတာများ သူမို့လို့ ယုံကြည်တယ်။ သူ့ဘဲကြီးကို ငါတွေ့သားပဲ .. ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ တွဲနေတာ။ သူကတော့ သူ့ကိုသိပ်ချစ်တယ် ထင်နေပုံ ရတယ်။ ငါ ရယ်ချင်လိုက်တာ” လို့ မြင့်မိုပြောတုန်းကဆို ဆွေဆွေကြားသွားမှာစိုးလို့ မနည်းကို မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲနဲ့ ပြရတယ်။ ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်၊ နွေတို့က သတင်းထောက်တွေ ဆိုတော့ နေရာပေါင်းစုံကိုရောက်ပြီး လူပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ရတာ။ တခါတလေ မြင်ရကြားရ မသက်သာတာ တွေလည်း ရှိတာပေါ့လေ။
နွေကတော့ ဒါတွေမသိတော့ပါဘူး။ ဘယ်တုန်းကမှလည်း မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ဆိုတာကို မတွေး ဖူးဘူး။ ကိုကိုနဲ့က အတူသာနေတယ် မင်္ဂလာဆွမ်းတောင် ကျွေးလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုကို ကလည်း လုပ်ချင်လားလို့ တခါမှ မမေးပါဘူး။ သူ့မှာ တာဝန်မရှိတဲ့အတိုင်း ..။
နွေ့ အတွေးကို နွေပြန်လန့်သွားတယ်။ ခုတလောမှာ ကိုကို့ကို အပြစ်မြင်စိတ်တွေ တော်တော်လေး များနေသလိုပဲ။ ညကလည်း ကိုကိုက ပြောသေးတယ် “မင်းပုံစံက အရင်နဲ့ကိုမတူဘူး၊ တခုခု ကြောင့် မာန်တက်နေသလိုပဲ” တဲ့။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နွေ့အနေနဲ့ မာန်တက်နေတာ ဟုတ်လား၊ မဟုတ်ဘူးလား မပြောနိုင်ပေမယ့် နွေ့အလုပ်ကို နွေကျေနပ် ပျော်ရွှင်နေတာတော့ သေချာတယ်။
“ကဲ မိနွေ .. လိုက်မယ်ဆို သွားမယ်ဟေ့” လို့ မထိုက်ဆော်သြလိုက်မှ နွေ့အတွေးပြတ်သွားတယ်။ လောကနတ်က ပြန်လာမှပဲ ဆောင်းပါးရေးတော့မယ်လေ။
ခုတလောမှာ နွေတို့ အထက်တန်းတုန်းက သင်ရတဲ့ ရှေး ကဗျာလေး တပုဒ်ထဲက စာသားတချို့ .. ဘယ်လိုက ဘယ်လို နွေ့ခေါင်းထဲ ဝင်နေတယ်မသိဘူး ..
“မယူလိုက်က မိုက်လို့ထင် .. ယူလိုက်ပြန်က ကြိုက်လို့ထင်” တဲ့ … မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘဝကို ရေးထားတာလေ။ သိပ်ကို ပေါ်လွင်တာပဲ။ ယောက်ျားတယောက်က ပေးလာတဲ့ အခွင့်အရေးကို ငြင်းပြန်ရင်လည်း .. (အဲဒီ အခွင့်အရေးက တကယ့်စေတနာမှန်နဲ့ ပေးတာဖြစ်နေရင်) မိုက်လိုက်တာ အပြောခံရမယ်၊ တကယ်လို့ ယူလိုက်ပြန်ရင်လည်း တလွဲတွေးတတ်သော သကောင့်သားများက သူတို့ကိုကြိုက်လို့ပဲလို့ လိုရာဆွဲတွေးကြတယ်တဲ့။ ဟုတ်သားနော်။
ခုခေတ် စပွန်စာဆိုတဲ့ ဘဘကြီးတွေ၊ အန်ကယ်ကြီးတွေနဲ့ ပတ်သက်မိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို အဲဒီ ကဗျာရွတ်ပြရမယ် ထင်ပါရဲ့။
ဒါက .. ရွေးစရာလမ်းမရှိတဲ့ သဘောကို ပြောတာလား၊ ရှေးခေတ်က အခြေအနေကြောင့်လား၊ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်ခေတ်ဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေး ဆိုရင် ဒီလိုချည်းပဲလား။ ဟင့်အင်း .. မဖြစ်ရဘူး။ ဘာဆိုင်လို့လဲ မိန်းမနဲ့ ယောက်ျား ဆက်ဆံရေးမှာ မိန်းမဘက်က ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် အောက်ကျ နောက်ကျ နိုင်ရတာလဲ။ အခွင့်အရေးက သတ်သတ်ပဲ .. အချစ်က သတ်သတ်ပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ အခွင့်အရေးပေးမှ ချစ်တာမျိုး မဖြစ်သင့်သလို၊ ချစ်လို့ အခွင့်အရေး ပေးမယ် ဆိုတာကော အပေးအယူ မဆန်လွန်းဘူးလား။ ထူးဆန်းလိုက် တာ .. ဘယ်တုန်းကမှ နွေ အဲဒီလို တွေ မတွေးခဲ့၊ မစဉ်းစားခဲ့ ဖူးဘူး။
နွေသိခဲ့တာက မိန်းကလေး ဆိုတာ နူးနူးညံ့ညံ့သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နေ၊ ကိုယ့်ချစ်သူ၊ ကိုယ့်ခင်ပွန်းကို ခြေသုတ်ပုဆိုး မြွေစွယ်ကျိုး ပြုစု။ သူတို့ပြုသမျှနု ဒါပဲလို့ ထင်ထားတာ။ ခု အဲဒီအထင်တွေကို နွေကိုယ်တိုင် ပြောင်းပြန်လှန်ချင်နေမိတယ်။ အဖေနဲ့ အမေကို နွေပြန်စဉ်းစားမိတော့လည်း ပထမဆုံးအကြိမ် နွေ မကျေ မချမ်းဖြစ်မိတယ်။ ပင်ပမ်းတာချင်းတူတူ၊ အိမ်အတွက် ဝင်ငွေရှာရ တာချင်းတူတူ၊ ပညာတတ်တာချင်းလည်း တူတူ (သာချင်းသာ အမေကတောင် ပိုသာသေးတယ်၊ ပြီးတော့ အလုပ်ချိန်အားဖြင့်လည်း အမေကပိုတယ်) အဲဒါကို အဖေ့ကို အမေက ပြုစုရတယ်၊ ထမင်းဟင်းချက်ကျွေးရတယ်၊ ခူးကျွေးရတယ်။ အိမ်ကိစ္စ၊ သားသမီး ကိစ္စတွေကို အမေက ပိုယူရတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲ။ အချစ်ကြောင့်လား။
ယောက်ျားတွေက အချစ်ဆိုတာ တခုတည်းနဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ ဘဝကို ပိုင်စိုးမှာလား။ နွေကော .. အချစ် ဆိုတာရဲ့ ဖမ်းစားမှုကြောင့် ကိုကိုရဲ့ ကျေးကျွန်ဖြစ်နေရမှာလား ..။ ဒါဆိုရင်တော့ ကြောက် စရာကြီးပဲ။ နွေ အဲဒီလို မဖြစ်ချင်ဘူး။
“နင်တို့က ငါ့အတွက် ပူနေကြတယ်။ ငါက ပျော်နေတာဟ၊ ခုမှ ငါ လွတ်လပ်သွားတာ” လို့ ပြောခဲ့တဲ့ မထိုက်ကို နွေပြန်မြင်ယောင်ကြည့်မိတယ်။ “မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို မုဒိတာ မပွားနိုင်လောက်အောင် မနာလို စိတ်ကြီးတဲ့ ယောက်ျားတွေကို ငါလန့်သွားပြီ။ သူကတော့ ငါ့ကို အလုပ်မလုပ်စေချင်တာ ချစ်လို့လို့ ပြောမှာပေါ့ဟာ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါချစ်တာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ငါသိနေတယ်၊ အဲဒါ ငါ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို သူ မနာလိုတာဟ”
ချစ်သူနှစ်ယောက်ကြားမှာ အဲဒါတွေရှိလား။ နွေသိပ်လန့်သွားတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ရှိနေတယ်လေ။ နွေ့ကိုကြည့်တဲ့ ကိုကို့မျက်လုံးတွေက စိမ်းကားအေးစက်လာတာ နွေခံစားနေရတယ်။
အမြဲတမ်း အိမ်မှာ ဖရောင်းတိုင်မီးနဲ့ စာရေးတတ်တဲ့ နွေ့ကို နောက်ပိုင်းမှာ သိသိသာသာ ကန့်ကွက် လာခဲ့တယ်။
“အိမ်ကို အလုပ်တွေယူမလာနဲ့ကွာ။ မင်းဟာက အလုပ်ချည်းပဲ၊ ဘယ်မှာလဲ နားချိန်”
စေတနာနဲ့ နွေပင်ပမ်းမှာစိုးလို့ ပြောသလိုလိုနဲ့ နွေ့အလုပ်မှာ အောင်မြင်မှုနည်းအောင် ပြောနေတာ လို့ ဘာလို့ နွေတွေးမိတာလဲ။ တကယ်ဆို ကိုကိုက ငါ့ကို စေတနာနဲ့ ပြောတာပါလေလို့ ဘာလို့ မတွေးမိတာလဲ။
သေချာတာက နွေတို့ကြားမှာ အက်ကြောင်းတခုက တဖြည်းဖြည်း အရာထင်လာပြီ။ ကိုကို့ရဲ့ ဂစ်တာသံကို ကြည်နူးတာထက် အနှောင့်အယှက်တခုလို့ နွေမြင်တတ်နေပြီ။ ကိုကိုရဲ့ အသုံးမဝင်မှု တွေကို နွေ စိတ်ကုန်စ ပြုလာတာကကော ကိုကို့ကို နွေမချစ်တော့တာလား။
နောက်ဆုံး ကိုကို ဘယ်မိန်းကလေးနဲ့ တွဲနေ တွဲနေ စိတ်သိပ်မဝင်စားတော့တဲ့ထိ ဖြစ်လာတဲ့ အချိန် မှာတော့ နွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမြင့်ဆုံး အတိုင်းအတာအထိ ထိတ်လန့်သွားတော့တယ်။ ကိုကိုနဲ့ နွေ တယောက်နဲ့ တယောက် စကားများ ရန်ဖြစ်တာမျိုးလည်း တော်တော်နည်းသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့် နွေးထွေးမှုလည်း တော်တော်လေး နည်းသွားပြီ။
ဆူညံပွက်လောရိုက်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို နွေစိတ်ပျက်စပြုလာပြီ။ အရင်က ကိုကို့ကြောင့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ရွှင်လို့ရတဲ့ နေရာမှာ ခု နွေမပျော်တော့ဘူး။ အိမ်ထက် အလုပ်ထဲမှာ နွေ ပိုပျော်တယ်။
“ယောက်ျားတွေက အလကားပါဟာ၊ မိန်းမတွေကို သူတို့က အပေါ်ယံအလှတမျိုးပဲ စိတ်ဝင်စား တာ၊ ဒီမိန်းမရဲ့ ဦးနှောက် ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ သူတို့ အတွက် အရေးမကြီးဘူး၊ ဒီမိန်းမရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ ဒီမိန်းမရဲ့ နှလုံးသား ဒါတွေကို သူတို့ ထည့်မတွက်ဘူး”
စိတ်နာနာနဲ့ ပြောနေတဲ့ ဝေမာ့စကားသံကိုလည်း နွေပြန်ကြားယောင်နေမိတယ်။ ဝေမာက သိပ်ထက်တဲ့ မိန်းကလေး၊ သိပ်လည်းတော်တယ်၊ စိတ်ကောင်းလည်း ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ရုပ်ကလေးက မလှရှာတော့ ယောက်ျားတွေက မြင်တာနဲ့ လန်လန်သွားကြတာ။ ချက်တင်မှာ ပြောနေတဲ့အချိန် ဖြူးနေပေမယ့် လူချင်းတွေ့ဖို့ ချိန်းလိုက်ပြီဆိုရင် ဝေမာ အသည်းကွဲရတာပဲ။ ခုတော့ ဝေမာလည်း တော်တော်လေး ငြိမ်သွားပြီ။ သူ့ကို တကယ်ချစ်တဲ့၊ သူ အခြေအနေမှန်ကို လက်ခံနိုင်တဲ့သူမျိုးကိုပဲ သူစဉ်းစားတော့မယ်တဲ့။ မြင့်မိုရဲ့ လက်ချာတွေ မိသွားတာလည်း ပါတာပေါ့။
မြင့်မို ကျပြန်တော့လည်းတမျိုး ..။ ရုပ်ကလေးက ချစ်စရာလေး၊ ဒါပေမယ့်သူက ယောက်ျားတွေကို သိပ်အထင်သေးတာ၊ သူ့ကိုချဉ်းကပ်လာတဲ့သူမှန်သမျှကို ကောလွှတ်တာချည်းပဲ။ စိတ်မဝင်စားဘူး တဲ့။ အသည်း တော်တော်မာတဲ့မိန်းမ၊ နွေသာသူ့နေရာမှာဆို မလွယ်ဘူး။ နွေက စိတ်ပျော့တယ် လေ။
စိတ်ပျော့လို့လည်း ကိုကို့ရဲ့ စကားလုံးတွေအောက်မှာ မိန်းမူးရင်း အမေတို့ တခါမှ တွေးထင် မထားခဲ့ဘူးတဲ့ နေရာမျိုးကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ခဲ့မိတာပေါ့။ ခုအချိန်မှာတော့ “ကိုကိုတို့ ကလေးမယူချင်သေး ဘူးကွာ” လို့ ပြောခဲ့တာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရတော့မလားမသိဘူး။ နွေ့ဘာသာနွေဆို မိုက်မိုက်မဲမဲနဲ့ ကလေးတယောက် ယူဖို့ ကြိုးစားမိဦးမှာ။ ကလေးရှိတာက သံယောဇဉ်ကြိုးကို ပိုခိုင်စေတယ်ဆိုတဲ့ ရှေးလူကြီးတွေစကားကို ယုံလို့ပေါ့။ တကယ်က ကလေး ရှိတာဟာ ခိုင်ပြီးသားသံယောဇဉ်ကြိုးကိုပဲ ပိုခိုင်စေမှာပါ .. မခိုင်လက်စ သံယောဇဉ်ကြိုး ဆိုရင် တော့ ဘယ်လောက်ပဲ ကလေးတွေရှိရှိ ပြတ်မှာပဲ။ အဲဒီလို ပြတ်ကြတဲ့အခါကျ ကလေးတွေပဲ ကြားက မြေစာပင် ဖြစ်ကြရမှာလေ။
မြင့်မိုက အမြဲပြောလေ့ရှိတယ် “ငါက Problem child ဟ” တဲ့။ ဟုတ်တယ် .. မြင့်မိုရဲ့ ဖေဖေက သူတို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက မြင့်မိုမေမေကို ထားသွားခဲ့တာလေ။ မြင့်မိုက သူ့ဖေဖေ အပါအဝင် ယောက်ျားတွေကို အထင်မကြီးတာ၊ စိတ်နာတာ ခုထိ စွဲနေတာတဲ့။
“ငါက ၁၂ နှစ်သမီးလောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ဖေဖေက မေ့မေ့မှာ ဘာအပြစ်မှမရှိဘဲ တခြား မိန်းမ တယောက်ကို ယူသွားတာဟ။ အဲဒါ ငါသိတယ်။ ပိုဆိုးတာက မေမေတယောက်တည်း ငါတို့ကို ရုန်းကန်ကျွေးခဲ့ရတာလေ၊ ဖေဖေက တချက်လေးတောင် လှည့်ကြည့်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီကတည်းက ဖေဖေ့ကို ငါအရမ်းမုန်းခဲ့တာ။ ခု သိတတ်ချိန်မှာ မမုန်းတော့ပေမယ့် ယောက်ျား တွေကို အထင်မကြီးတဲ့ စိတ်ကတော့ စွဲနေခဲ့တယ်” လို့ မြင့်မိုက တခါတလေ သူ့အကြောင်းကို စိတ်လိုလက်ရ ပြောပြတတ်တယ်။
မြင့်မိုပြောတာလည်း ဟုတ်တော့ ဟုတ်သလိုလိုပဲ။ နွေ့ပတ်ဝန်းကျင်က ယောက်ျားတွေကိုပဲ ကြည့်လေ .. အားလုံးကို ရောပြီး ရမ်းတာ မဟုတ်ပါဘူး .. မထိုက်ချစ်သူ ကိုလေး ..၊ နောက် ဆွေဆွေရည်းစား၊ နောက်တော့ ကိုကို .. ဝေမာနဲ့ တွေ့ခဲ့တဲ့ ယောက်ျားတွေ .. ဘယ်သူကများ အထင်ကြီးစရာ ကောင်းလို့လဲ။
ဒီအချိန်မှာ ဘာလို့ နွေ ဒါတွေကို စဉ်းစားနေမိတာလဲ။ နွေ .. ကိုကို့ ကို ပြတ်ချင်နေပြီလား ..။ ကိုကို နဲ့ ကွဲပြတ်ဖို့ဆိုတဲ့ မိုးကြိုးကို စကားလုံး ထန်းလက်တွေနဲ့ ကာဖို့ ကြိုးစားနေတာလား။
သေချာတာက နွေနဲ့ကိုကို့ အခြေအနေက ပေါက်ကွဲခါနီး ဗုံးတလုံးလိုပဲ ..။ ဘယ်အချိန်မှာ ကွဲမလဲ ဆိုတာ စောင့်နေရတဲ့ အနေအထားဖြစ်နေပြီဆိုရင် ပိုမှန်မယ်။
ဒါပေမယ့် ကွဲဖို့ ပြတ်ဖို့ဆိုတာက နွေတို့ မြန်မာ့လူနေမှုစနစ်ထဲမှာ ထင်သလောက်တော့မလွယ် လှဘူး။ နွေ ယောက်ျားနဲ့ ကွဲမယ်ဆိုရင် မေမေတို့ကလည်း (ကိုကို့ကို ကြည့်မရသည့်တိုင်အောင်) လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဆို နွေက ဒီပုံစံအတိုင်း တသက်လုံး နေသွားရမှာလား။ ကိုကိုကလည်း ငါ့ကို ဘယ်တော့မှ ကွဲနိုင်မယ့်မိန်းမ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်နေမှာလား။ အဲဒါကို နွေက ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံနေရမှာလား ..။
လောလောဆယ်တော့ နွေခေါင်းခြောက်တာပဲ သိတယ်။ ည ၁၂ နာရီထိုးပြီ .. ကိုကို ပြန်မလာ သေးဘူး။ မီးလည်း မလာဘူး .. နွေ အိပ်လို့လည်း မရဘူးလေ ..။
“သမီးယောက်ျားနဲ့ တကယ်ပြတ်နိုင်တယ်ဆိုရင် ကွဲခဲ့လိုက်တော့။ မေမေ လက်ခံမယ်”
အမေ့စကားကို နွေ အရမ်းအံ့သြသွားတယ်။ နွေ့အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြောပြတဲ့အချိန်မှာ .. မေမေက “ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းပဲ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ ဆက်လျှောက် ရမှာပဲ” လို့ပဲ ပြန်ပြောလိမ့်မယ်လို့ နွေ မျှော်လင့်ထားခဲ့တာ။ ဒါမှမဟုတ် “မိန်းကလေးဆိုတာ ဖက်ပေါ် ဆူးကျလည်း ဖက်ပေါက်၊ ဆူးပေါ်ဖက်ကျလည်း ဖက်ပဲပေါက်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ဆုံးမ လိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားတာ။ တကယ်တမ်း အမေ ပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားက နွေ့အတွက် တော်တော်လေး ထူးဆန်းနေတယ်။
ညက အနေအထားကတော့ နွေနဲ့ ကိုကို့ကြားက အကြီးမားဆုံး ပေါက်ကွဲမှုကြီးပဲ။ ညဉ့် ၁ နာရီ ထိုးခါနီးလောက်မှ ပြန်လာပြီး လိုက်ပို့တဲ့ကားပေါ်မှာ ပါလာတဲ့ စားသောက်ဆိုင်က ကောင်မလေး တအုပ်နဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ အကြာကြီး ဟေးလားဝါးလား လုပ်နေတာ။ နွေထွက်ကြည့်တာကိုတောင် အရေးမလုပ်ဘဲ ကောင်မလေးတွေနဲ့ သားပြောသမီးပြောတွေ နားရှက်စရာကောင်းလောက်အောင် ပြောနေကြတာလေ။
အဲဒါကို နွေက ပေါက်ကွဲတော့ နွေက လူမှုရေးမသိဘူးတဲ့ .. အဲဒီကောင်မလေးတွေကို ထွက် နှုတ်ဆက်သင့်တယ်တဲ့။ ကိုကိုတို့ဆိုင် တခါလိုက်သွားတုန်းက နွေ့ကို ကိုကို မိန်းမမှန်းသိသိကြီးနဲ့ နွေက ပြုံးပြတာတောင် တချက်လေး ပြုံးရယ်မပြဘဲ ကိုကို့ကိုကျတော့ ချွဲချွဲပစ်ပစ် စကားတွေ ပြောနေတတ်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးတွေကို နွေက ဘာကိစ္စထွက်နှုတ်ဆက်ရမှာလဲ။ အဲဒါ နွေ သဝန်တို တာမဟုတ်ဘူး။ ခုလည်း ရပ်ကွက်ထဲမှာ နွေ့ဂုဏ်သိက္ခာကျလောက်အောင် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် လုပ်နေတာတွေ့လို့ နွေ ပြောမိတာ။
နွေ့ကို ကိုကိုက အလကား မာန်တက်နေတဲ့မိန်းမဆိုပြီး နွေ့အလုပ်ထဲက ရှိသမျှ ယောက်ျား တွေနဲ့ ပေးစားတော့ နွေမခံနိုင်တော့ဘူး။ နွေ သူ့ကို ချစ်ခဲ့သမျှ ဒီတညတည်းနဲ့ စိတ်ကုန်သွားပြီ ..။ အစွမ်း ကုန် မိုက်ရိုင်းတဲ့စကားတွေ ပြောနေတာ ကိုကို မဟုတ်သလိုပဲ။ အားလုံး သဲထဲရေသွန် လိုက်သလို ပဲ .. နွေ သူ့ကို ဆက်မချစ်နိုင်တော့ဘူး။ နွေ့မှာ ရင်ဖွင့်စရာဆိုလို့ အမေပဲ ရှိတာ၊ နွေ့စကားကို ကောင်းကောင်း ဆိုးဆိုး နားထောင်ပေးမယ့်သူ ဆိုလို့လည်း အမေပဲ ရှိတာ ဆိုတော့ မိုးလင်းတာနဲ့ နွေ အမေ့ခြေရင်းကို အပြေး ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အံ့သြတာပေါ့ .. နွေ အမေ့ဆီက မျှော်လင့်ထားတဲ့စကားလုံးတွေက ဒါမျိုးမှ မဟုတ်ဘဲ။ နွေ့ကို နှစ်သိမ့်ပြီး ပြန်လွှတ်မယ်လို့ပဲ ထင်ခဲ့တာ။
“တကယ်ဆို အမေ့အနေနဲ့ အရင်ကတည်းက၊ သမီး ယောက်ျားနဲ့ တညသွားနေခဲ့ပြီး နောင်တ ရပါပြီလို့ ပြောပြီး ပြန်လာခဲ့တဲ့ မနက်ကတည်းက ပြန်လက်ခံသင်တာပါ။ မေမေ မှားတာပါ သမီးရယ်”
ဟင် .. အမေ မမှားပါဘူး .. ဘာလို့ မေမေမှားရမှာလဲ။ အဲဒီတုန်းကသာ နွေ့ကိုမေမေ ပြန် လက်ခံ ခဲ့မယ်ဆိုရင် .. နွေ နောက်တခါ ထပ်မမိုက်ဘူးလို့ ပြောနိုင်လား။ အဲဒီတုန်းက နွေ .. ကိုကိုတို့ ပတ် ဝန်းကျင်ကိုသာ ကြောက်ခဲ့ပြီး ကိုကို့ကိုမှ မကြောက်သေးတာ၊ ပြီးတော့ ကိုကို့ကို နွေ အဲဒီတုန်းက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်နေတုန်း .. အပြစ်မမြင်သေးတဲ့ အချိန်လေ .. ဒီစကားတွေကို နွေ စိတ်ထဲကပဲ ပြောနေမိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မေမေ့ကို နွေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နွေ့ပါးစပ်ကတော့ “သမီး တခုလပ်ဖြစ်သွားတာကို အမေ စိတ်မညစ်ဘူးလားဟင်” လို့ပဲ ပြန်ပြောမိတယ်။ အမေက ပြုံးပြီး “ဘာလို့ ညစ်ရမှာလဲ။ သမီးဘာသာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မေမေ့ သမီးက မေမေ့သမီးပဲလေ” တဲ့။
“မိန်းကလေးဖြစ်တာနဲ့ပဲ .. ကောင်းကောင်း ဆိုးဆိုး ဒီ ယောက်ျားတယောက်ထဲကို ကျိတ်မှိတ် ပေါင်းရမယ်ဆိုတဲ့ အမေတို့ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေက ကောင်းတဲ့နေရာတွေရှိသလို .. တချို့နေရာ ကျတော့ အမေတို့ မိန်းမတွေအတွက် တော်တော် ခံရခက်တဲ့ ကိစ္စတွေပဲ သမီးရယ်”
ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ပြောနေတဲ့ အမေ့ကိုကြည့်ရင်း နွေ့ရင်ထဲမှာ မေးခွန်းတွေ ပေါ်လာတယ်။ အမေကော အဲဒီထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကို တော်လှန်ချင်စိတ် ဖြစ်ခဲ့ဖူးလားလို့ပေါ့။ နွေ့ရင်ထဲက စကားတွေကို အမေ ကြားသွားလားမသိဘူး ..။
“တခုတော့ရှိတယ် သမီး .. သမီးမှာက သားသမီး မရှိသေးဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့် သမီး စိတ်ဆင်းရဲ နေတာကို အမေ ဖြေရှင်းပေးတာ။ တကယ်လို့ သမီးမှာသာ ကလေးရှိနေမယ်ဆိုရင် သမီးရဲ့ ကလေး စိတ်ချမ်းသာဖို့ကိုပဲ အမေ ပိုဦးစားပေးရမှာ” လို့ အမေက ပြောတယ်။
“ရယ်စရာတော့ ကောင်းသားသမီးရဲ့ .. အမေတို့ မြန်မာ လူမှုဝန်းကျင်က မတရားဘူးလေ။ သမီးကို မြှောက်ပေးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ယောက်ျားလေးကျတော့ လှေခါးသုံးထစ် ဆင်းတာနဲ့ လူပျိုဖြစ်တယ်တဲ့။ မိန်းကလေးကျတော့ လင်မရှိတဲ့ မိန်းမက တံခွန်မရှိတဲ့ ရထားလို မတင့်တယ်ဘူး ဆိုပဲ ဟားဟား”
အမေ့ရယ်သံမှာ စိတ်နာသံစွက်နေသလိုပဲ။ အမေ ဘာတွေ ခံစားနေရပါလိမ့် နွေသိချင်လိုက်တာ။ ဒီလိုစကားမျိုးတွေ အမေ့ဆီက မကြားဘူးတာတော့ အမှန်ပဲ။
“တကယ့်တကယ် ဖြစ်လာကြတော့ .. ကိုယ့်သားသမီးကို ငဲ့ညှာရတာနဲ့၊ ကိုယ့်မိဘဆွေမျိုး အသိုင်းအဝန်း ကိုယ့်ကြောင့် ဂုဏ်ငယ်မှာကို ငဲ့ကွက်ရတာနဲ့ .. အမေတို့ မိန်းမတွေမှာ .. ကိုယ် မချစ်တော့တဲ့ .. မသဒီတော့ တဲ့ ယောက်ျားကို ကျိတ်မှိတ်ပေါင်းသင်းနေကြရပြန်ရော”
“ဒါဆို .. ဟို .. အမေက .. အဖေ့ကို ..”
နွေ့ရဲ့ ထစ်အတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အမေက ကမန်းကတန်း ပြန်အဖြေပေးတယ် .. “အို .. သမီး အဖေကို သမီး မပြစ်မှားနဲ့နော်၊ အဖေက အမေတို့အတွက်၊ အမေတို့ မိသားစုအတွက်၊ သမီးတို့ အတွက် သိပ်ကို ကောင်းတဲ့ အဖေ၊ အမေ့အတွက် သိပ်ကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လေးစားရတဲ့ လင်ယောက်ျားပါ သမီးရယ်။ အမေက အဖေ့ကို စိတ်နာပြီး ဒီစကားတွေ ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းမတွေ အားလုံးအတွက် ခြုံပြီး ပြောနေတာပါ”
ကြည့်စမ်း အမေက ဘယ်လောက် ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်သလဲ။ ဒါ .. နွေ့ အမေပါပဲ။ သိပ်ကို သတ္တိရှိ၊ ရိုးသားပြီး အမှန်ကို မြင်တဲ့အမေ၊ ပြီးတော့ နွေ့ကို အင်အားတွေ အများကြီး ထည့်ပေးတဲ့ အမေ၊ သိပ်တော်တဲ့အမေ၊ နွေ့အတွက် စံပြမိန်းမဟာ အမေပါ ..။
အဲဒီနေ့က နွေ့ဆီကို ကိုကိုလိုက်မလာပါဘူး။ ထူးဆန်းစွာပဲ နွေ အရမ်းကို လွတ်လပ်ပေါ့ပါး နေတယ် ..။ ကိုကို့ကို နွေမလွမ်းဘူး။ နောက်တနေ့မှာတော့ နွေ ရုံးသွားဖို့ ပြင်နေတုန်း ကိုကို ရောက်လာတယ်။
“မမ နင့်ယောက်ျား လာတယ်” ဆိုတဲ့ ညီမလေးစကားကိုကြားတော့ နည်းနည်းအံ့သြမိ သွားသေးတယ်။ နွေအိမ်ရှေ့ကို ထွက်လိုက်တော့ အမေက သူ့ကို ဧည့်ခန်းထဲ ထိုင်ခိုင်းထား နှင့်ပြီ။ ကိုကို့မျက်နှာမြင်လိုက်တော့ နွေ့အတွက်အချစ်တွေ မကျန်တော့ဘူးဆိုတာ သေချာသွားပြီ။
Tuesday, October 06, 2009 | Labels: ဝတ္ထုရှည် |6Comments
Monday, October 05, 2009 | Labels: ဝတ္ထုရှည် |5Comments
“မြင့်မို မျက်နှာလည်း မကောင်းပါလား .. ဘာဖြစ်နေတာလဲ”
မထိုက်မေးလိုက်မှ နွေ သတိထားလိုက်မိတာ .. ကြည့်ပါဦး ဒီလောက် အမြဲတမ်း ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နေတတ်တဲ့ မြင့်မို ငြိမ်နေတာကိုတောင် သတိမထားမိလောက်အောင် နွေ အာရုံတွေ ထွေပြားနေတာလေ။
မေးလိုက်မှ မြင့်မို မျက်ရည်ဝိုင်းသွားတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ထူးဆန်းပြီ ..
“ငါ ပိုက်ဆံ ၅ သောင်းလောက် အရေးပေါ်လိုလို့ဟ”
“ဘာလုပ်ဖို့လဲ .. ၅ သောင်းတောင်မှလား”
မထိုက်ရဲ့အမေးကို မြင့်မိုက ခေါင်းညိတ်ပြီးပဲ အဖြေပေးတယ် ..။ နွေကတော့ သူတို့ နှစ်ယောက် ဘာပြောကြမလဲ နားစွင့်ရုံပဲ .. ၅ သောင်းဆိုတဲ့ ပိုက်ဆံက နွေတို့လို ဝင်ခါစ သတင်းထောက် ငယ်လေးတွေအတွက် သိပ်ကို များလွန်းပါတယ်။ ဘယ်က ရနိုင်မှာတဲ့လဲ။
“ငါတို့အိမ် စာချုပ်စေ့သွားတာ စာချုပ်ပြန်ချုပ်ရမယ်လေ။ ငါ့ယောင်းမ ရုံးက ချေးတာ တသိန်းပဲ ရတယ် .. အိမ်လခက ဈေးတက်သွားတယ်ဟ။ အဲဒါကြောင့် ၅ သောင်း အသည်းအသန် လိုနေတာ။ ဒါတောင် ၆ လစာချုပ်နော်”
“နင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မြင့်မိုရာ .. မမူယာဆီက ဝင်ချေးကြည့်ပါလား”
အကြံသာပေးပေမယ့် မဖြစ်နိုင်တာ မထိုက်ကော နွေကော မြင့်မိုကောသိတယ်။ မမူယာ ဆိုတာက သူတို့ ဂျာနယ်တိုက်ရဲ့ ရှယ်ယာရှင်တွေထဲက တယောက်၊ ငွေကိုင်တဲ့သူ။ သူတို့ရတဲ့ လစာလေး ၃ သောင်းခွဲက လကုန်လို့ ၃၊ ၄ ရက်နေရင် ကုန်ကြပြီ .. အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့အားလုံးရဲ့ အချေးအငှား သံသရာကြီး စပြီ။ ဒါပေမယ့် တထောင်မျိုး နှစ်ထောင်မျိုးလောက်ပဲ ရတာလေ။ ဒီလောက် အများကြီးတော့ ဘယ်သူကချေးမှာတဲ့လဲ။ မမူယာက ပိုတောင် ဆိုးသေးတယ်။ သူတို့အားလုံးကို ပြောထားပြီးသား လစာ ကြိုထုတ်ပေးမယ် .. ဒါပေမယ့် ၁၅ ရက်နေ့ တရက်ပဲ ထုတ်ပေးမယ်၊ အဲဒါလည်း တဝက်ပဲ အများဆုံးထုတ်ပေးမှာ ..။
သူတို့အားလုံး ၁၅ ရက်နေ့မရောက်မချင်း သူ့ဆီကကိုယ်ချေး .. ကိုယ့်ဆီကသူချေး .. မအိတို့လို ရာထူးကြီးပြီး နားလည်မှုလည်းရှိတဲ့သူဆီက ချေး .. ဒါလည်း အမြဲမရဘူး။ မအိဆီက ချေးတဲ့သူ များတော့ အားလုံးကို ဘယ်ချေးနိုင်မလဲ။
၁၅ ရက်နေ့ရောက်ရင်တော့ အားလုံး မမူယာ အခန်းကို မပြတ်ချောင်းကြရပြီ .. မမူယာ အခန်းထဲ က တယောက်လောက် နမူနာ ထွက်လာပြီဆိုရင် အားလုံး တလှည့်စီ ဝင်ဖို့ ပြင်ကြရပြီ ..။ လစာ တဝက်ကို ကြိုထုတ်ကြ .. လဆန်းက ယူထားတဲ့ အကြွေးအတိုအထွာတွေဆပ်ကြနဲ့ .. ကုန်လု နီးနီး ပိုက်ဆံလေးကို .. တချို့က ဈေးဖိုးလုပ် .. တချို့က ဆေးဖိုးလုပ် .. အားလုံးက ပိန်မသာ လိန်မသာ .. နွေကကော အဲဒီထဲကတယောက်ပဲ .. ဘာထူးမှာတဲ့လဲ။
လောလောဆယ် မြင့်မို ပြဿနာ ဘယ်လိုရှင်းကြမလဲ ..။ နွေတို့မှာလည်း သူ့ကိုချေးဖို့ နေနေ သာသာ ကိုယ့်ဘာသာ သုံးဖို့တောင် မရှိတာ။
“နင်ကြိုးစားကြည့်ဟာ .. မမူယာကို ဝင်ပြီး ငိုပြ .. သူက သနားတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့အတွက် ၅ သောင်းဆိုတာ ဘာမှ ဟုတ်တာမှ မဟုတ်ဘဲ”
မထိုက်အကြံပေးတဲ့အတိုင်း လူရှင်းတဲ့အချိန်မှာ မြင့်မို မမူယာအခန်းထဲကို ဝင်သွားတယ်။ သူထွက်လာမယ့် အချိန်ကို ရင်တဖိုဖိုနဲ့ စောင့်နေတဲ့နွေတို့ကို ဘိုးတော်က မျက်စောင်းထိုး ကြည့်တယ်။ “ဒီအချိန်ထိ အပြင်မထွက်ဘဲ ဘာလုပ်နေတာလဲ” ဆိုတဲ့သဘော .. နွေကော မထိုက်ကော ပေပြီးဆက်ထိုင်နေတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ မြင့်မို ထွက်လာတယ်။ သူ့မျက်နှာ မြင်လိုက်ကတည်းက သိလိုက်ပြီ .. အဆင်မပြေခဲ့ဘူး။
“ဒီလိုလုပ်ဟာ .. ငါ့အမေရဲ့အသိ အဒေါ်ကြီးတယောက်ရှိတယ်။ သူက ငွေတိုးပေးစားတာဟ၊ ငါစောစောက မပြောတာက .. သူက ပစ္စည်းမပါဘဲငွေယူရင် ၁၀ တိုးတောင် .. အတိုးများတယ်။ အဲဒါကြောင့် .. ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမှမဖြစ်ရင်တော့ အဲဒီကပဲ ဆွဲပေးမယ်ဟာ”
မထိုက်ရဲ့ အစီအစဉ်ကို မြင့်မိုက သိပ်စဉ်းစားမနေတော့ဘဲ သွားမယ်တဲ့။ အင်းလေ ဘာများစဉ်းစား စရာရှိသေးလို့လဲ .. နွေတို့မှာ ရွေးချယ်စရာက သိပ်မှ မရှိတာဘဲဟာ ..။ နွေလည်း သတင်း လိုက်ချင်စိတ် မရှိဘူး .. ဒါပေမယ့် မဖြစ်သေးဘူး .. အမေ့အသိ ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ ဒီနေ့ ချိန်းထားတာ .. အင်တာဗျူးဖို့ သွားရမယ်။
တပတ်စာ ထုတ်ပေးထားတဲ့ လမ်းစရိတ်တွေလည်း မရှိကြတော့ဘူး .. ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ .. လောလောဆယ်လိုတာ ကားခ ၂၀၀ လောက် .. အဲလောက်ရှိရင်ရပြီ .. ။ အဲလောက်ကတော့ မအိဆီကပဲ ချေးရတော့မှာပဲ။ နက်ဖြန် စာမူခ ထုတ်ရရင်တော့ ၁၅၀၀ လောက်ရမယ် ထင်တယ်။ ဒီတပတ် နွေရေးတာ ပုဒ်ရေ နည်းနည်းများတယ်။ နွေတို့လို အငယ်တန်းသတင်းထောက် တွေက တိုက်ကို သတင်း တပတ်ကို အနည်းဆုံး ၄ ပုဒ်ပေးရတယ်။ အဲဒီ ၄ ပုဒ်ထက် ကျော်ရင် စာမူခ ရတယ်။ မထိုက်ကတော့ စီနီယာ ဆိုတော့ တပတ်ကို အနည်းဆုံး ၆ ပုဒ်ပေးပြီး ပိုမှ စာမူခ ရတယ်။
အဲဒီမှာလည်း သတင်းက အေ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ ဆိုပြီး အဆင့်တွေခွဲထားတော့ စာမူခ မတူဘူး။ အေကတော့ ရခဲပါတယ်။ မျက်နှာဖုံးမှာပါမှ ရတာ တပုဒ်ကို ၂၀၀၀၊ ၃၀၀၀ အစားစားပဲ။ မျက်နှာဖုံးပါတာတောင် .. ပိုအရေးကြီးတဲ့ သတင်းဆို ၃၀၀၀ ရတယ်။ အတွင်းမှာတော့ ဘီ ဆိုရင် ၁၀၀၀၊ ဒါလည်း ရခဲပါတယ်။ နွေတို့ရတဲ့သတင်းတွေက စီတို့ ဒီတို့ပဲ။ ဒီကတော့ ပွဲသတင်းလေ .. ပွဲတက်ပြီးရေးတဲ့သတင်း တပုဒ်မှ ၃၀၀ ပဲရတာ။ စီက ၆၀၀ ရတယ်။ သူကတော့ ဈေးကွက် သတင်းလေး ဘာလေးပေါ့။
“နွေ ..နင်ကော လိုက်မှာလား”
“လိုက်လို့ မဖြစ်သေးဘူး .. ငါ ကလေး ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ ချိန်းထားသေးတယ်။ လမ်းစရိတ်ချေးမလို့ မအိကို စောင့်နေတာ။ ဘယ်သွားလဲ မသိဘူးဟာ”
“ဒါဆို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သာ လိုက်သွားတော့ .. ဟိုမှာ ဘိုးတော်က အထဲဝင်လိုက် အပြင်ထွက် လိုက်နဲ့ ငါတို့ကို မကျေနပ်ကြောင်း ပြနေပြီ .. လစ်စို့ ..”
မထိုက်ပြောတာလည်း ဟုတ်တယ်။ နွေတို့က ဘိုးတော်လို့ ခေါ်တဲ့ အယ်ဒီတာချုပ်လည်းဖြစ် တိုက်ပိုင်လည်းဖြစ်တဲ့ ဆရာက နွေတို့ရှေ့မှာ ကောင်းကောင်းလမ်းသလားပြနေပြီ .. ခဏနေလို့ သူ့မျက်စိရှေ့က ထွက်မသွားရင် အော်တော့မှာ သေချာတယ်။
နွေတို့ သုံးယောက်သား အစတော့ ခပ်ကုပ်ကုပ်နဲ့ အခန်းပြင် ထွက်လိုက်တယ် .. လှေခါး ၄၊ ၅ ထစ် ဆင်းပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကလေးတွေလို အော်ဟစ်ပြီး ရယ်မောနောက်ပြောင်နိုင်ကြပြီ။ မြင့်မိုတောင် ခုဏက စိတ်ညစ်နေပါလားလို့ မထင်ရအောင် နွေ့ခါးကိုလိုက်တို့ပြီး စနေတယ်။ မအိလည်း လှေခါးက တက်လာပြီ .. မအိနဲ့ နွေတို့ ၃ ထပ်မြောက်မှာ ဆုံတော့ နွေတို့က ပိုက်ဆံချေး .. မအိက ပွစိပွစိ ပြောချင်ယောင်ဆောင်ပြီး နွေတို့ချေးတဲ့ လမ်းစရိတ် ထုတ်ပေးတယ်။
“ပိုက်ဆံချေးရုံနဲ့ မရဘူးနော် မအိ .. ညနေ လက်ဖက်ရည်တိုက်ဦး”
ဒီလောက် ပူပင်စရာရှိနေတာတောင် နောက်နိုင်သေးတဲ့ မြင့်မိုကို နွေ သိပ်အားကျတာပဲ .. ။
ပုခုံးသိုင်းအိတ်ကို စားပွဲပေါ် ရုတ်တရက်ပစ်ချလိုက်တဲ့ မထိုက်ကြောင့် နွေတို့အားလုံး လန့်သွားတယ်။
“တောက် .. မုန်းဖို့ကောင်းလိုက်တာဟာ .. ငါ အဲဒီလူကြီးကို အသေသတ်ချင်တယ် သိလား”
“ဘယ်သူလဲ .. ဘာဖြစ်တာလဲ မထိုက်ရဲ့ .. မထိတ်သာ မလန့်သာဟာ .. နင့်ကို ဘယ်သူက ဘာလုပ်လိုက်လို့လဲ”
မြင့်မိုမေးခွန်းမဆုံးခင်မှာ မထိုက် ချုံးပွဲချပြီး ငိုတော့တာပဲ ..။ နွေတို့ အားလုံးလည်း လန့်သွား ကြတယ်။
“… ဌာနက ညွှန်မှူးဆိုတဲ့ လူကြီးပေါ့ .. ငါ့ကို အင်တာဗျူးပေးမယ် ဆိုလို့ သွားတာ .. ငါ့ကို .. ငါ့ကို .. တောက် .. မိုက်ရိုင်းတယ်ဟာ”
“ဘာ မထိုက် .. နင်ကပါးဆွဲမတီးလိုက်ဘူးလား .. နင်က သူလုပ်သမျှ ခံလာတာလားဟ”
“သူက ဘာမှ လုပ်တဲ့ဆီတော့ မရောက်ပါဘူး .. ဒါပေမယ့် ငါ့ကို သူ့အရွယ်ကြီးနဲ့ .. ညီမလေးက သိပ်လှတာပဲ .. ဘာလို့ သတင်းထောက်လုပ်တာလဲ .. အစ်ကိုကြီးဆီမှာ အတွင်းရေးမှူး လုပ်မလား .. တိုက်ခန်းတခန်း ငှားပေးထားမယ် .. ဟန်းဖုန်းလည်း ပေးထားမယ် ဆိုပြီး ရုပ်ကလည်း ပြီတီတီနဲ့ .. မဟန်ဘူးဆိုတာသိတာနဲ့ ငါလည်း .. ထပြန်မယ် လုပ်ရော .. ငါ့လက်ကို အတင်းဆွဲထားတာလေ .. ငါက ဆရာနဲ့ ပြန်တိုင်မယ် .. အော်လိုက်မယ် ဆိုမှ လွှတ်ပေးတာ”
“တောက် .. ဒါ အချောင်ရမလားလို့ လုပ်ကြည့်တာဟာ။ အဲဒီလူကြီးငါသိတယ် .. ကြောင်သူတော် ကြီး”
မထိုက်ပြောသမျှ .. မြင့်မိုပြောသမျှကို နွေ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ပဲ နားထောင်နေမိတယ်။ သူတို့ ပြောတာတွေ ကြားရတာ ရင်တုန်လိုက်တာ။ မထိုက် သနားပါတယ်။ အင်းလေ နွေတို့အားလုံးက ရုပ်ကလေးတွေ သနားကမားပေမယ့် အဝတ်အစားလေးတွေက စုတ်တိ စုတ်ပြတ်လေးတွေ ဆိုတော့ လူအထင်သေးတာပေါ့။ ငွေရရင် ဘာမဆို လုပ်မယ့်သူတွေ လို့လည်း ထင်လားမသိဘူး။ နွေ့ရင်ထဲက အဲဒီညွှန်မှူးဆိုတဲ့သူကြီးကို အော့နှလုံး နာလိုက်တာ။
“ငါတို့ ပုံစံတွေကိုကလည်း စုတ်ပြတ်ပါတယ်ဟာ။ လူအထင်သေးမယ်ဆိုလည်း သေးလောက် တယ်။ အဝတ်အစားလည်း တလနေလို့ တထည် ဝယ်မဝတ်နိုင်တဲ့ဘဝ။ မထိုက်ရာ နောက်တခါ အဲဒီ နေရာမျိုးသွားရင် တယောက်တည်း ဘယ်တော့မှ မသွားပါနဲ့ အန္တရာယ်များတယ် သိလား”
မြင့်မိုရဲ့ စေတနာစကားကို မထိုက်မျက်စောင်းက တားဆီးလိုက်သလိုပဲ။ ဟုတ်တာပေါ့ .. နွေတို့ကို တိုက်က မှာထားပြီးသား .. သတင်းလိုက်ရင် ဘယ်တော့မှ ၂ ယောက်မသွားပါနဲ့တဲ့။ သွားရင် လိုက်သွားတဲ့သူကို အလုပ်ထုတ်မယ်တဲ့။ နွေ့ကိုတောင် မအိက မတတ်သေးလို့ နားလည်မှုနဲ့ လိုက်ပေးနေတာ။ နွေကျွမ်းကျင်သွားရင် မအိ လိုက်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
နွေတို့ ဘဝတွေက ဒီလောက်တောင်ပဲ ဆိုးရွားလား ..
အဲဒီအချိန်မှာ အောင်ထူးတယောက် ချွေးသံ တရွှဲရွှဲနဲ့ ပြန်ရောက်လာတယ် .. ပြီးတော့ နွေ့ဘေးမှာ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ထိုင်ချလိုက်တယ်။
“ဘာလဲ သတင်းမရဘူးလား” ဆိုတဲ့ မြင့်မိုရဲ့ အမေးကို အောင်ထူးက ခေါင်းပဲယမ်းပြနိုင်တယ်။
“စိတ်ကုန်တယ် နှာဗူးတွေ” ဆိုပြီး စားပွဲကို ဒုန်းကနဲ ထုတယ်။
အောင်ထူး သတင်းသွားယူတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာက အရာရှိက အောင်ထူးကို သတင်းမပေးဘဲ တခြားတိုက်က အလုပ်သင် သတင်းထောက်မ ပေါက်စလေးကို သတင်းပေးလိုက်တာလေ။ အဲဒါကို အောင်ထူးက ခံပြင်းနေတာ။
“တောက် .. အဲဒီအချိန်မှာ ငါ့ရဲ့ ယောက်ျားဖြစ်ရတဲ့ ဘဝကို စိတ်အနာဆုံးပဲဟာ”
အောင်ထူးရဲ့စကားက ငိုအားထက် ရယ်အားသန် ..
ဒီနေ့ နွေတို့အားလုံး ရုံးမှာ ဖင်မြဲနေကြတာ အကြောင်းရှိတယ်။ မဟုတ်လို့ကတော့ ဒီအချိန် သတင်းရေးရင်တောင် မြစံပယ်မှာ ထိုင်ရေးကြမှာ ..။ ဒီနေ့က ဂျာနယ် ထွက်ရက် ဆိုတော့ စာမူခ ရမှာလေ။ စာမူခ ထုတ်ပေးပြီးမှ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားကြဖို့ အားလုံး သဘောတူ ထားကြတာ။ နွေကတော့ ရတဲ့စာမူခလေးထဲက ကိုကိုကြိုက်တတ်တာလေး တခုခု ဝယ်သွားဖို့ စဉ်းစားနေတယ်။
လက်ဖက်ရည်ကို နွေကြိုက်ပေမယ့် တခွက် ၂၅၀ ကတော့ မဖြုန်းရက်တာ အမှန်ပဲ။ သူများတိုက် တာ ဆိုရင်လည်း တခါတလေပဲ ကောင်းတာလေ။ ကိုယ့်အလှည့်ကျလည်း ပြန်တိုက်မှ ကောင်းမှာ ပေါ့။ ဒီတော့ နွေက မြင့်မိုတို့နဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် လိုက်ထိုင်လည်း ရေနွေးပဲ တခွက်ပြီး တခွက် သောက်နေလိုက်တာပဲ .. မရှက်ပါဘူး။
ဒီတပတ်တော့ မထိုက်သတင်း ကာဗာမှာ ပါတာဆိုတော့ သူက တိုက်မှာပါ ..။ အဲဒီအချိန်မှာ ဧည့်ကြိုကောင်တာက စုမြတ်က “မထိုက်ရေ ဖုန်း” တဲ့ .. မထိုက် အသည်းအသန် ပြေးသွားတယ်။ ပြေးမှာပေါ့ .. ဒီအချိန်လာတဲ့ဖုန်းက သူ့ကိုလေးကလွဲရင် ဘယ်သူဖြစ်ရဦးမှာလဲ ..။
လူကတော့စုံပြီ .. ဝေမာလည်း ပြန်ရောက်လာပြီ .. မျက်နှာကရွှင်နေပုံထောက်တော့ သတင်း ရခဲ့တယ်နဲ့ တူပါရဲ့ ..။
“နွေ .. ငါ .. ဟိုတယောက်နဲ့ ချိန်းထားတယ်သိလား။ စနေနေ့ ညနေ မွန်းဘိတ်ခရီမှာ တွေ့ကြမယ်”
ဝေမာရွှင်နေတာ ဒါကြောင့်ကိုး ..။
နွေ့ကို တုံးရန်ကောဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ ဝေမာကြည့်တယ်။ ဝေမာ့မျက်နှာလေးက ကလေး ဆန်ပေမယ့် သိပ်မလှရှာဘူး။ အရပ်ကလေးကလည်းပု .. ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလည်း မလှ ဆိုတော့ ခုထိ ရည်းစားမရနိုင်ဘူး။ ဒီကောင်မလေးက သတင်းလိုက်တော်သလောက် .. ဒီဘက်မှကျ တော်တော် လေး မစွန်ဘူး ပြောရမယ်။
“ဟာ နွေကလည်း .. ဟိုနေ့ကပဲ နင့်ကို ငါပြောပြတယ်လေ။ ငါနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ သိတာလေ။ မှတ်မိလား .. ခု အပြင်မှာတွေ့ဖို့ ချိန်းထားပြီ .. ဒီတခါတော့ အိုကေမယ် ထင်ပါရဲ့ .. ဟီး”
“ဝေမာကလည်းဟာ .. မမှတ်သေးဘူးလား .. တော်ကြာ နင် ခံစားရဦးမယ်”
“အောင်မာ .. ဟိုအရင်ဟာတွေက အချစ်စစ်အချစ်မှန်မှ မဟုတ်တာ။ ခုကမှ တကယ့်အချစ်စစ် အချစ်မှန် သဘောပေါက်”
ဝေမာတယောက် အွန်လိုင်းချက်တင်ကနေ ရည်းစားတယောက် ရလိုက် .. အပြင်မှ ချိန်းတွေ့တော့ သူ့ကို ဟိုက မကြိုက်ဘဲ .. လန်သွားလိုက် .. သူက မကြိုက်လို့ လန်သွားလိုက်နဲ့ .. ဘယ်နှယောက် မှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ မြင့်မို မကြားလို့ .. ကြားများကြားလို့က ဝေမာတို့ အဆဲခံရဦးမှာ။
မမူယာ အခန်းထဲက ကိုသက်ခိုင်ထွက်လာပြီ .. ပြုံးရွှင်လို့ .. စာမူခရတော့မယ်။
လမ်းဘေးဈေးတန်းလေးက ဈေးသည်တွေကြားထဲမှာ ကြုံ့ကြုံ့လေးထိုင်ပြီး ငရုပ်သီးမှုန့် ရောင်းနေတဲ့ နွေ့ရှေ့မှာ ပုဆိုးအကွက်ကြဲတထည် လာရပ်တယ် ..။ ဒီပုဆိုးကို နွေ သိတာပေါ့ ..။ နွေကိုယ်တိုင် ရွေးပေးထားတာပဲဟာ ..
အဖေက မပြုံးမရယ် နွေ့ကို စိုက်ကြည့်နေတယ်။
“သမီးကြီး .. အလုပ်တခု အဖေလျှောက်ထားပေးတယ် .. နက်ဖြန် အင်တာဗျူး ဝင်ရမယ် .. အဖေလာခေါ်မယ် .. မနက် ၉ နာရီ လမ်းထိပ်ထွက်စောင့်နေ ကြားလား”
ဒီတော့မှပဲ အဖေ ပြုံးဖော်ရတယ်။
“သမီး သဘောကျမှာပါ။ သမီးဝါသနာပါတဲ့အလုပ်နဲ့ နည်းနည်း နီးစပ်တယ်။ သတင်းထောက် အလုပ်လေ .. အရှေ့ရပ်ဝန်း သတင်းဂျာနယ်မှာ .. အဲဒီက စီအီးအိုက အဖေ့သူငယ်ချင်းလေ .. အဲဒါ အငယ်တန်းသတင်းထောက်လိုတယ် ဆိုလို့ သမီးအတွက် လျှောက်လွှာတင်ပေးခဲ့တယ်။ အင်တာဗျူးကတော့ ကိုယ့်ဘာသာဖြေရမယ်တဲ့ .. ရော့ အဲဒီဂျာနယ် လိုလိုမယ်မယ် အဖေ ယူလာတာ .. ဖတ်ထားလိုက်ပေါ့”
သတင်းထောက် ဆိုပါလား။ နွေတခါမှ မစဉ်းစားဘူးတဲ့အလုပ် ..။ ဖြစ်ပါ့မလား အဖေရယ်လို့ မေးချင်ပေမယ့် နွေမမေးရက်ဘူး။ တော်ကြာ အဖေ စိတ်ညစ်သွားဦးမယ်။ အဖေက နွေ ခုလိုတွေ လုပ်နေရတာကို မကြည့်ရက်လို့ တကူးတက အလုပ်ရှာပြီး လာပြောတာလေ။
ကိုကို့ကို ပြောပြတော့ စိတ်မဝင်စားသလို လုပ်နေတယ်။ ဖေဖေ့ကို မကြည်တာလည်း ပါမှာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နွေကတော့ ရှိသမျှထဲက အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ အဝတ်အစားလေးတွေ ထုတ်ထား လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဖေဖေပေးခဲ့တဲ့ အရှေ့ရပ်ဝန်းဂျာနယ်ကို သေချာဖတ်နေလိုက်တယ်။
သတင်းဆိုတာကို တခါမှ သေချာဖတ်ဖူးတဲ့သူမှမဟုတ်ဘဲ .. ဒါပေမယ့် စာပေနဲ့တော့ နွေက နီးစပ်ပြီးသားပါ။ အဲဒီ ဂျာနယ်တိုက်ရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ်နာမည်ကိုလည်း နွေကြားဖူးတာပဲ။ ဖြစ်မယ် ထင်တာပဲ မပြောတတ်ဘူး။
စိတ်စောပြီး နွေက အရင်ရောက်နေပေမယ့် အဖေ့ကိုသိပ်မစောင့်လိုက်ရပါဘူး။ ရန်ကုန်မြို့လယ် ခေါင်က တိုက်ခန်းတခန်း ဆိုပေမယ့် တိုက်ခန်းက အကျယ်ကြီးပဲ။ လူတွေလည်း အများကြီးပဲ .. ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ ..။ နွေ့လို သတင်းထောက် အင်တာဗျူးလာဖြေတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပဲ။ လူတွေအများကြီး ခန့်မှာလို့လည်းပြောကြတယ်။ ကောင်မလေး ချောချောလေးတွေ လည်းတွေ့တယ်။ သူတို့ကတော့ ကြော်ငြာမားကက်တင်းလာလျှောက်တာတဲ့။
နွေ့အလှည့် .. အဖေက အားပေးသလို ပြုံးပြတယ်။
“ကိုလွမ်းမောင်မောင်ရဲ့ သမီး ဟုတ်လား”
“တော်တော်များများတော့ ဖတ်ပါတယ် .. စာဖတ်လည်း ဝါသနာပါပါတယ်”
“မြသန်းတင့်သိလား .. သူ အခုဘယ်မှာနေလဲ”
သုံးယောက် ဝိုင်းမေးနေတဲ့အထဲက ခပ်ပေစုတ်စုတ်တယောက်က ဖြတ်မေးလိုက်တာ ..။ နွေ့ကိုများ .. အချဉ်မှတ်နေသေးတယ်.. နွေ ပြုံးလိုက်တယ်။
“ဆရာကြီး မြသန်းတင့်က ဆုံးသွားပါပြီရှင့် သူ့ရဲ့ လေရူးသုန်သုန်ကိုတော့ တော်တော်လေး ကြိုက်ပါတယ်”
“ဒီတိုက်က အယ်ဒီတာချုပ်နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ”
ဒါကတော့ ခပ်ဝဝ အသားဖြူဖြူနဲ့ လူက မေးတာ။ မျက်နှာတော့ချိုသားပဲ။
“ဦးမျိုးမြင့်မောင်ပါ ..သူ့ရဲ့ အယ်ဒီတာ့အာဘော်တွေ သဘောကျပါတယ်”
ဘယ်ရမလဲ .. ခုဏကမှ ဂျာနယ်တွေလှန်ပြီး အယ်ဒီတာ့အာဘော်တွေချည်း ဖတ်လိုက်တာ။ အသက်အကြီးဆုံး တောက်တောက်ပပ လူကြီးက သဘောကျသွားပုံရတယ်။ ဦးမျိုးမြင့်မောင် ဆိုတာ သူပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ သေချာတာပေါ့ ..။
“အင်း သမီးက မဆိုးဘူးပဲ။ တခုတော့ရှိတယ်။ သတင်းထောက်လုပ်ဖို့က လေရူးသုန်သုန် ဖတ်ရုံနဲ့တော့ မဖြစ်ဘူး။ သမီး ဘ ခြောက်လုံးကို သိလား”
“ဟုတ်ကဲ့ သိပါတယ်။ သတင်းရေးတဲ့အခါ အရင်ဆုံးစထွက်ရမယ့် အပိုဒ်မှာ ထည့်သင့်တဲ့ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို ဘယ်နေရာ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာ့ကြောင့် ဘယ်လိုဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းတွေပါ။ အင်္ဂလိပ်မှာတော့5W and H ပါ”
ဘယ်ရမလဲ .. လမ်းမှာ အဖေ လက်ပူတိုက်သင်ပေးထားလို့ သိတာ။ တကယ်ဆို အဲဒါတွေ တလုံးမှ နွေနားလည်တာမဟုတ်ဘူး။
“ဘယ်ဆိုးလို့လဲ။ မင်း သတင်းရေးဖူးလား”
“မရေးဖူးပါဘူးရှင့် .. စာရေးတာတော့ ဝါသနာပါပါတယ်။ သင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်အောင် လုပ်မှာပါ”
“ဒါနဲ့ သမီးက အိမ်ထောင်နဲ့ပေါ့ ဟုတ်လား .. အမျိုးသား ဘာလုပ်လဲ”
ဒီမေးခွန်းကို နွေမဖြေချင်ဆုံးပဲ .. နွေညာလည်း မညာချင်ဘူး .. ဒါပေမယ့် ..။
“သူက အိမ်မှာ ဂစ်တာသင်တန်းပေးပါတယ် ဆရာ”
“သြော ဟုတ်ပြီ .. သမီးကို ခန့်ဖြစ်ရင် အကြောင်းကြားမယ် ဟုတ်လား ..။ လစာကတော့ ဝင်ဝင်ချင်း အငယ်တန်းသတင်းထောက်လစာ ၃ သောင်းခွဲ ခံစားခွင့်ရှိမယ်။ တပတ်ကို သတင်း အနည်းဆုံး ၄ ပုဒ်ရေးရမယ်။ အဲဒီထက် ကျော်ရင် စာမူခရမယ်။ ကဲကဲ .. သမီးအဖေကို ဆရာက နှုတ်ဆက်တယ် ပြောလိုက်ဦး ဟုတ်လား”
သမီးဘယ်လိုထင်လဲ ဆိုတဲ့ အဖေ့အမေးကို ဖြေဖို့ စိတ်ထဲက ပိုင်နိုင်နေသလိုပဲ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ နွေ အခန်းထဲက ထွက်လာတော့ အထဲက ပြောနေသံ သဲ့သဲ့ ကြားလိုက်ရတယ်။
“မဆိုးဘူးနော် ဆရာ .. သူ့အရင် မေးလိုက်သမျှ .. မြသန်းတင့်လည်းမသိ .. မဟာဆွေလည်းမသိ၊ ဇဝနလည်း မသိနဲ့ ဟားဟား၊ အရှေ့ရပ်ဝန်းမှာ အလုပ်လာလျှောက်ပြီး အယ်ဒီတာချုပ်တောင် မသိဘူး .. တော်တော် ညံ့တဲ့ကလေးတွေ” တဲ့။
Friday, October 02, 2009 | Labels: ဝတ္ထုရှည် |3Comments
Thursday, October 01, 2009 | Labels: ဝတ္ထုရှည် |6Comments